ဒီပစ္စည်းအကြောင်း Vis ည့်သည်တွေဘာပြောကြသလဲ - Porn On Your Brain
သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိည့်သည်များသည်ယခုသန်းနှင့်ချီသောအရေအတွက်ရှိသည်။ ဤတွင် visitors ည့်သည် ၁၅၀ ခန့်၏အကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က (2008 / 2009 န်းကျင်), လူတွေကသူတို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းထွက် freaked ခံခဲ့ရသောအင်တာနက်အပေါ် surfacing စတင်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအချို့ကောင်းသောဟောင်းများ၏အကူအညီဖြင့်လွန်ကဲ porn ၏ကွဲပြားဒီဂရီတစ်ခုအစိုင်အခဲစိုက်ထူရနိုင် deathgrip တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ အဆိုပါလိုက်တယ်အရာအချို့ကိစ္စများတွင်, လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏သူတို့အတူတူအတိအကျရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့သညျကား, ထိုအဖိုရမ်ရေးသားချက်များမှတုန့်ပြန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုတော့အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်တော့လူတွေဟာသူတို့ဟာမိန်းမတွေရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုမလှည့်စားနိုင်အောင်တကယ့်အစွန်းရောက်လိင်အမျိုးအစားများနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်လောက်အောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကမျှော်လင့်ချက် / ကြည့်ပြီး အကယ်၍ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါကဤစိတ်ပျက်လက်ပျက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်
ထိုအချိန်က YBOP နှင့်အခြားဖိုရမ်များစွာမပါရှိသည့်ဤသူများသည်၎င်းတို့သည်တစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိတကယ့်အမျိုးသမီးများနှင့်မရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောထူးဆန်းသောမြည်းသည်မထင်မှတ်သော၊ porn တစ် ဦး အလှည့် - အပေါ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများကအပျိုကညာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပျက်ပြားသွားစေတဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့နှစ်အတော်ကြာပျက်ကွက်ခဲ့ကြရတယ်။ သူတို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ပုံမှန်ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကိုဘယ်သောအခါမျှရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့သဘာဝတရား၏မထင်မှတ်သောအရာများဟုယုံကြည်ကာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှသူတို့ကိုယ်သူတို့သီးခြားခွဲထားကာရသေ့များဖြစ်လာသည်။ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေဘယ်လောက်များများ PMO စွဲတာလဲ၊ ငါ့အတွက်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကြက်၊ ကြက်ဥ (အပြာစွဲလမ်းမှု (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေသီးသန့်ဖယ်ထားတာ) ကဘာလဲဆိုတာကိုပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားမိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် PMO အရာကဒီယောက်ျားတွေရဲ့ porn-induced ED ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ပုံမှန်လိင်အင်္ဂါ မှလွဲ၍ တခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ …
ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ ငါအပျိုဖော်ဝင်အလယ်၌စတင်, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအများအပြားမအောင်မြင်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကငါ့စိတ်ကိုပျက်စီးစေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်လာတယ်။ လိင်မှုကိစ္စမပါဘဲစီးပွားဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုမရှိသလောက်နည်းသောယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်၏ထူးဆန်းမှုကိုအမြဲအမှတ်ရနေသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုဤသို့စဉ်းစားခဲ့သည် -“ Wow၊ ဒီလူအတွက်ဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲ၊ ဒီလိုလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တောင်မှငါအလွယ်တကူစိုက်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ”
ပေါ့ပေါ့တန်တန်မဂ္ဂဇင်းအလယ်၌လှပသောအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါ“ လူတွေကဒါကိုအရမ်းပူတယ်။ ဒါပေမယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေမှာအစွန်းရောက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ရင်ငါနှိုးလို့မရဘူး။ ငါအရမ်းလိုက်တယ်။ ပုံမှန်နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြက်လုံးများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်သူစိမ်းများနှင့်ပြောဆိုခြင်းတို့နှင့်အတူတူပင်။ အဓိကအချက်ကငါဟာအခြေခံအကျဆုံးအဆင့်မှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းသတိပေးခဲ့တယ်။
ငါ porn တက်ပေးခြင်းစတင်တစ်နှစ်ကြာမှီ, ငါပင်ငါသဘောတူညီခဲ့ဘယ်တော့မှသောပြင်းထန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ငါ့ကိုရောဂါသူကိုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပညာရှင်ကြည့်ဖို့ သွား. , antidepresents ပေါ်မှာငါ့ကိုထားချင်တယ်။
YBOP မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၏အဓိကပြproblemနာမှာ ၂၄/၇ တွင်ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းနှင့်အလေးလံဆုံးကျောက်ကိုကျွန်ုပ်နှလုံးထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရသည်။ ငါသည်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံး NoFap Streak (~ ရက်ပေါင်း 24) အပေါ်သွားသောအခါအခြားသူများကအစီရင်ခံသည်အတိုင်းအလားတူစူပါပါဝါကိုသတိပြုမိလာတယ်။ အဲဒါတကယ်ထူးဆန်းသလား။ ၇ ဘီလီယံရှိသောကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းနေစေခြင်း၏အဓိကအချက်မှာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ ၁၀၉ ရက်မြောက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ယုံကြည်မှုရှိမှု၊ လူမှုရေး၊
TL; DR - အဓိကအချက်ကလူတွေတင်ပြတဲ့အပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်လုံးဝမအံ့သြမိပါ။ ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါဆိုးများသည်မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာ၏လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုပျက်စီးစေသည်။ PMO ၏အမှတ်အသားများကိုမမှတ်သားသော၊ သို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် PMO ကိုရှောင်ကြဉ်သောအခြားသူများကဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုမမြင်တွေ့ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်မအံ့သြမိပါ။ ပထမရလဒ်အနေဖြင့်မည်သည့်လူ ဦး ရေစာရင်းဇယားသည်ထိုရလဒ်များကိုတင်ပြခဲ့သည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ အချို့သည်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာခင်းအဖြစ်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သော်လည်း၊ ငါကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာကုသမှုပါပဲ။ BG
ငါနှင့်အတူတူပင်အရာရာကိုဖြတ်သန်းသွားသောလူများ၏ဤပုံပြင်များအားလုံးကိုဖတ်ခြင်းသည်အံ့သြစရာပင်။ ငါသီတင်းပတ် ၅ ရက်မှ ၆ ရက်ထိပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ကို ၆ နှစ်ကြာပိတ်ထားပြီးနောက်ပြန်လည်ပုံမှန်ပြန်စတင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာအကြှနျုပျ၏ libido တစ်ဖန်ပြန်လာပြီးအကျိုးကျေးဇူးများခံစားနေရသည်။ libido ပြန်လာတာအပြင်အခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်။
ငါသည်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့နှင့်အတူတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရပုံရသည်။ တနည်းကား, ကြောင့်လွတ်လပ်မှုကိုငါ့ကိုဆောင် သွား. သောယုံကြည်မှု, ငါ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ငါသာပိုမိုနီးကပ်စွာဆည်းပူးခဲ့ကြ
ကျွန်ုပ်သည်ဆေးဝါးဗေဒ (အခြေခံအားဖြင့် receptor ဒိုင်းနမစ်နှင့်အပြန်အလှန်လေ့လာမှုလေ့လာမှု) နှင့် Neuroscience (ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုသေးငယ်သည်) တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်ရေးသားချက်များကိုဖတ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်၏သင်တန်းကိုဖတ်နေစဉ်အာရုံကြောသိပ္ပံနယ်ပယ်များအကြားဆက်နွယ်မှုများစွာကိုသတိပြုမိလာသည်။ / receptor သီအိုရီနှင့်ဤနေရာတွင်လူများကြုံတွေ့နေသောအရာ ... [ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာချန်လှပ်] GJ
တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင် site ပေါ်တွင်ရှိအရာအားလုံးကိုအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာဤမျှလောက်များစွာသောဘဝတွေကိုသင်တန်း၏ဤမျှလောက် better..and သတ္တုတွင်းလုပ်🙂ငါသည်သင်တို့ကိုရေးသားနေပါတယ်အကြောင်းပြချက်အကြှနျုပျနှငျ့အမိတ်ဆွေတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်တစ်ဦးဂျာမန် site ကိုအပြေးနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ (www.porno-sucht.com အရာနည်းလမ်းများ porn-addiction.com) ဂျာမဏီခုနှစ်တွင် NO တ nofap လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ် porn ရှောင်ရာမှရနိုင်သမျှသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုသိတယ်။ Stephan
ငါ yourbrainonporn ၏ဗီဒီယိုများ thru မယ်ငါနှင့်ဤကွီးစှာသောပစ္စည်းပစ္စယပါ! သောမယ့်သိပ်ကရှင်းပြသည်! တောင်မှ porn နှင့် whatnot ကျော်လွန်ပြီး။ ဘုံရိုးရာအဘို့အ neuroscience အပေါ် A ကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာ။ ကို BP
ငါကြည့် မြေတပြင်လုံးကိုဗီဒီယို ထိုသို့တကယ်ကောင်းကောင်းပြုလေ၏။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ငါကညစ်ညမ်းတဲ့မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်“ no porn” လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော့်ကိုအဖိုးတန်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့လက်နက်ပေးပြီးကျွန်တော့်ရဲ့သန္နိresolve္ဌာန်ကိုခိုင်မာစေတယ်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ [YouTube တွင်]
အသက် ၃၁ နှစ် - PMO ကိုမရပ်တန့်ခင်မှာတောင်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ခဲ့ဘူး - လိင်ဟာဒုတိယအလုပ်တစ်ခုပဲ
ငါ့ဖေဖေ yourbrainonporn.com အကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်ငါတကယ် NoFap ကိုတွေ့ခဲ့တယ် ငါဒါကိုတွေ့ရတာတကယ်ဝမ်းသာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကနောက်ကွယ်ကကွန်ကရစ်သိပ္ပံပညာတစ်မျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုမြင်သာထင်သာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြasနာတစ်ခုအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုဖို့ကပိုလွယ်ကူလို့ပါ။ အခုငါ fap တိုင်းဓာတုဗေဒပိုဆိုးလာတာကိုငါတွေ့ပြီ။ ကျွန်မငယ်ငယ်ကတည်းက“ အသုံးပြု” ခဲ့တယ်၊ အခု ၂၇ နှစ်ရှိပြီ။ အက်စ်အက်စ်
သငျသညျယောက်ျားတွေအတူတူထားကြပြီဘယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းအမြစ်။ ပုံစံကမယုံနိုင်လောက်အောင်ချောမွေ့ပြောင်လက်၊ ထိရောက်မှုရှိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ကိုချထားသည်။
ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းမကြာသေးမီက CNN ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရပြီးပထမဆုံးစိတ်ကူးမှာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ စကားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြတာကကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်တဲ့အသင်းအဖွဲ့ဆိုတာဘာသာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ငါမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ထားသင့်တယ် ဤ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အဖြစ် site ကိုဖွင့်။ အဆိုပါသိပ္ပံခရစ်ယာန်တွေကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုထက် WAAAAY ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာတော်တော်လေး Flat-မြေကြီးတပြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ဘာသာတရားပေါင်းသင်းအေးစက်လျက်ရှိသည်။ RH အ
ဒီအတောက်ပဖြစ်ပါတယ်။ ငါလေးနှစ် porn နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြပြီးကိုယ့်အလေ့အကျင့်ကိုချိုးဖျက်ချင်တယ်။ ဒါဟာနောက်ကွယ်ကဇီဝဗေဒနှင့်သိပ္ပံသိမှတ်ကြလော့လွတ်လပ်မှုကိုမှတံခါးကိုသော့ဖွင့်ဖို့သော့တူ၏။ စင်ကာပူဒေါ်လာ
ဂယ်ရီ Wilson ကယောက်ျားတွေ၏လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များကသူတို့ယောကျ်ားဘဝပြန်လည်နှင့်ဤကပ်ရောဂါ, ဒီရောဂါ, ငရဲကနေဒီ 21st ရာစုမူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ကူညီရန်အတူတကွဤမျှလောက်ချပြီးများအတွက်ရှိ၏။ နံနက်
YBOP တွင်စုဆောင်းခဲ့သောသူ၏အံ့သြဖွယ်ရာသိပ္ပံပညာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဂယ်ရီဝီလ်ဆင်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်အမှန်ပင်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်ထက်ကျွန်ုပ်ဘဝသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ သင်ဤအရာကိုစွဲကိုင်ထားပါကတကယ့်အပြောင်းအလဲကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်သည်အထိမဖြစ်နိူင်ပါ။ ထို့နောက်မှောင်မိုက်သောရုန်းကန်မှုများကိုပြန်လည်အမှတ်ရနေမည်။
ငါရှာပုံတော်ကိုပျင်းရိခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့သော၊ မိမိကိုယ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုရွံရှာခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ မြူခေါင်းများ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤရှာဖွေမှုကိုပိုမိုပျော်ရွှင်သော၊ အထွက်၊ ဆက်သွယ်မှု၊ ရွှင်လန်းမှု၊ မောင်းနှင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အိုမီ
ဤပြissueနာအတွက်သင်အချိန်ပေးပြီးစွမ်းအင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီပုံပြင်တွေကိုဝေမျှဖို့နဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖို့အလွန်စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့လူတွေဘယ်လောက်များများမြင်နေလဲ၊ ခင်ဗျားကူညီခဲ့တဲ့လူအရေအတွက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာမင်းဘယ်လောက်များများကိုငါသာစိတ်ကူးနိုင်မှာပါ။ အိုင်အေ
ငါတတျနိုငျသလျှင်, ငါ လာ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်ပွေ့ဖက်မယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်များစွာသောတခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုရန်နှင့်သင်သည်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ရွှင်လန်းသောခံစားရသင့်ကြောင်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားပျော်ရွှင်မှုကိုလှူဒါန်းခဲ့သိရပေးပါ။ သငျသညျအနညျးငယျကလူလုပ်ဖို့သတ္တိရှိသည်သောအရာတစ်ခုခုပွုပါပွီ။ အစဉ်အမြဲငါ (ကျနော်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားရာ) ဘဝမှာအများပြည်သူပလက်ဖောင်း (သို့မဟုတ်အများပြည်သူရုံး) သို့ရောက်ရှိလျှင်သင်တို့ကိုငါသတိရနှငျ့သငျပွုပါပွီအလုပ်ဝန်ခံဖို့အခြားသူများကိုရရန်ကြိုးစားရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအလွန်နှလုံးပါကျေးဇူး-သငျသညျ။ 🙂 LP သို့
ချီလီကနေမင်္ဂလာပါ မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေကိုမင်းဆက်လုပ်သွားမှာပါ ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်း။ ကြည်လင်ပြီးမျက်လုံးများမှအလင်းနှင့်ညှိနေပြီဟုဆိုပါစို့။ ကံကောင်းပါစေ၊ သင်ဟာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် FD
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတွေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ ကိုအချိန်နောက်ကျစေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပိုလှုံ့ဆော်မှုကိုမင်းကိုပေးခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းမှုဟာစွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေကသိပ္ပံပညာကိုနားလည်စေခဲ့တယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်မဟုတ်ရင်အလွန်သာမန်ဘဝနေထိုင်ကြသည်။ ငါခဲမူးယစ်ဆေးများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းသုံးရက်တစ်ပါတ်ယူကြပြီဘယ်တော့မှ, ကိုသောက်လော့။ သို့သျောလညျးပဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသို့ချိတ်ဆက်နှင့်သင့်အကြောင်းရေးထားလျက်ရှိ၏သို့မဟုတ်မှမှတ်ချက်များကိုကြားရကြပြီများစွာသောလူကဲ့သို့တူညီသောလမ်းဆင်းသွားလေ၏တယ်။
သင်၏ပြfrနာကိုဖြေရှင်းရာတွင်သင်၏ပွင့်လင်းမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုသည်ထူးခြားသည်။ တနည်းကား - မင်းရဲ့အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်ကလူတွေကိုကူညီနေတယ်။ AS
အားလုံးသင့် hard အလုပ်အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်နှင့်ဂယ်ရီစာသားငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, RR
သင်နှင့်ဂယ်ရီတို့သည်ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသောဤဆန့်ကျင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င် porn နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြောင်းအရာများအပေါ်တစ်ခုတည်းသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောသဘောထားရှိသည်။ 'ညစ်ညမ်းသောခရစ်ယာန်ဆန့်ကျင်သူများ' နှင့် 'ဆန့်ကျင်သောအမျိုးသမီးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒီ' တို့အကြားမသက်မသာစကားရှိသည်မှာအများပြည်သူနယ်ပယ်အတွင်းရှိအပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည့် 'ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု' ၏စုစုပေါင်းကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ခင်ဗျားတို့လုပ်နေကြတာကလေကောင်းလေလေပဲ။ အချို့လူများက '' အာ 'ကိုပြောရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဖက်၊ အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဝင်သူများနှင့်ခရစ်ယာန်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အမှန်တရားကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ' ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဖက်ပိုနှစ်သက်ကြမယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးကအနတ္တပါ။
ဦး နှောက်ကိုလက်ဝှေ့ယမ်းခြင်းနှင့်အခွင့်အရေးယူခြင်းမှလက်ဝှေ့သမားတစ် ဦး ကဲ့သို့ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးမှအပြန်အလှန်အားဖြင့်ငါလှည့်စားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်နေတဲ့ဒီလူအများစုဟာငါနဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှာငါဟာ charlatans နဲ့ hypocritos တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ 'အမှန်တရား' တွေကိုတကယ်ဖြစ်ချင်စေချင်တဲ့အလွန်နုံတဲ့လူတွေလို့ငါ့ကိုထင်တယ် (နှစ်ဖက်စလုံးမှအခြေအနေကငါ့ကိုများစွာသတိပေးသည်) ရှိတ်စပီးယား၏ 'အတိုင်းအတာအတွက်အတိုင်းအတာ' တွင်အန်ဂျလို၏စရိုက်လက္ခဏာ။ မင်းတို့ယောက်ျားတွေပြောနေတာကဒီတိုင်နှစ်ခုမှလာတာနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ MB
ဝိုး။ ငါသည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုဖတ်ရှုပြီးဆုံး။ ဗီဒီယိုနဲ့အသံကလစ်တွေကိုလည်းကြည့်ပြီးနားထောင်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းသဘောကျမိပါတယ် အများပြည်သူကျန်းမာရေးပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်မျက်စိမမြင်မိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ TS, MD
ငါသည်ဤပြဿနာ (PIED) အတွက်တက်ရပ်နေနှင့်လှဲမှားသောယောက်ျားပညာပေးကူညီဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသ၏အောက်ခြေကနေဂယ်ရီ Wilson က (နှင့်ဤဖိုရမ်များ၏တက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်သူ့ကိုတူသောအခြားသူများကို [www.yourbrainrebalanced.com]) ကျေးဇူးတင်ချင်ခဲ့တယ် ဤလောက၏။ ပညာရေးယောက်ျား၏နိဂုံးကိုပျောက်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီမျိုးဆက်သတိထားမိဘများ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမိတျဆှဆက်ဆံရေး, Self-image ကို, ယုံကြည်မှုနှင့်ဘဝပေါ်တွင်သင်၏ယေဘုယျအလားအလာအပါအဝင်သင်၏အသက်တာမှအမြဲတမ်းနှင့်လေးနက်သောအန္တရာယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောသူတို့သားကိုဆုံးမသွန်သင်လိမ့်မယ်။ ဂျေအေ
မင်းလုပ်နေတာတွေဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ယောက်ျားတွေသိစေချင်တယ်။ YBOP ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်၊ ငါ့ဘဝဘယ်မှာနေမလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး။ မရေမတွက်နိုင်အောင်အခြားသူတွေလည်းအဲဒီလိုခံစားရတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ SG
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ၎င်းသည်ဇီဝကမ္မဗေဒအရ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်သဘာဝတရား၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရညစ်ညမ်းသောသဘာဝကိုပြသသည့် 'လောက' ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းပိုဒ်များကိုကိုးကားထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထက်ကျွန်ုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသောဤအကြောင်းအရာကိုလူအများအားညွှန်ပြခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များနှင့်အတူပြproblemနာသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများတွင်စွဲကပ်နေသောလူများသည်၎င်းတို့ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအပေါ်သူတို့၏ကတိက ၀ တ်များကိုပယ်ဖျက်သော dopamine စွဲလမ်းမှု၌စွဲမြဲလာသည်။ ဖြစ်ချင်တော့လူအများစုကအကြောင်းအရာကိုစိတ်ဓာတ်မကျသည့်အခါ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်လွတ်မြောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိကြသည်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါဝင်သည် ထောက်ခံစာ အဘယ်သူ၏အသက်တာကိုအခမဲ့ခြိုးဖောကျခွငျးအားဖွငျ့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်လူစုထဲက။ တိုင်းသင်းအုပ်ဆရာသူတို့ရဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာ၌ဤ website ကိုရှိသင့်ဒါပေမယ့်ဒါတိုင်းမိတ်ဆွေတစ်သင့်နှင့်တိုင်းလူတစ်ဦး။
သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်များနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်အလုပ်အတွက်သင်နှင့်သင့်ခင်ပွန်းကျေးဇူးတင်ရပါမည် !! AG က
(၉ လ) ကောင်းခဲ့ပြီ၊ ဒီမှာငါအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါဒီမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးများစွာသောအမြင်များရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့ငါတကယ်ထည့်သွင်းစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး (အားလုံးပြောခဲ့ဖူးတယ်) ။ ငါ့ ဦး နှောက်ကအမြဲတမ်းဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲလိုချင်လိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါဟာဒီကိုငါ့နောက်ကွယ်မှာထားနိုင်တယ်။ ဒါကငါဟာဘယ်တော့မှပြန်စတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကလူပဲ၊ ဂယ်ရီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ CF
(အသက် ၁၈) ဒီနေ့ဟာအသက် ၉၈ နှစ်ရှိပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာအပြောင်းအလဲအချို့ကိုကျွန်ုပ်ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ခံစားမိပေမယ့်အပြောင်းအလဲတွေကအပျက်သဘောဆောင်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ငါအရင် post မှာနင်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောပေမယ့်ငါဒီစာကိုရေးနေချိန်မှာငါတောင်ပိုကောင်းတယ်လို့ယောက်ျားတွေကိုငါပြောရမယ်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်မည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ YBOP အကြောင်းတောင်မှကျွန်တော်သိခဲ့ရသည့်အံ့ဖွယ်တစ်ခုဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုစကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြလို့မရပါ။ AG
ငါ Porn ဗီဒီယိုများပေါ်မှသင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲကနေတယ်သတင်းအချက်အလက်များကိုချစ်၏။ ဒါဟာ porn မှကြွလာသောအခါသင့်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ရန်အမှန်တကယ်ကူညီပေးသည်။ CJ
မင်းရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကကျွန်တော့်ကိုယူဆောင်လာတဲ့သင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကြီးနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေအသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လူ့ဓာတုဗေဒကိုနားလည်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဟုခံစားရသည်။ ဤအော်ဂဇင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုသင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံသည်အားကောင်း။ ငြိမ်းချမ်းသည်ဟုခံစားရပြီးကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ EP
သန့်ရှင်းသောအ shit ။ ဒါကိုငါမယုံနိုင်သေးဘူး။ ငါ YBOP ကိုရှာပြီးမယုံနိုင်ဘူး၊ ဒီလောက်ကြာတာကိုငါမယုံနိုင်ဘူး! ၁၃ နှစ်နီးပါးတိတ်ဆိတ်စွာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏အမှား၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုများကြောင့်၊ (ကျွန်ုပ်အတူတကွမစုစည်းနိုင်သေးဟုမယုံနိုင်သေးပါ) ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏လှပသောတုံ့ပြန်မှုကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကိုသတိမပြုမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်တော့်ဘေးမှာအိပ်ရာဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရှိပြီးကာမဂုဏ်ခံစားနေရသောအမျိုးသမီးများ၊ ဒီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဤလူအုပ်စုကိုရှာဖွေခြင်းသည်မည်မျှသက်သာရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ငါးရက်အတွင်းအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဘလော့ဂ်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အလွန်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရာဖြစ်သဖြင့်အားရကျေနပ်ဖွယ်စကားလုံးများရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ MK
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုတည်ထောင်သူများ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်သောအရာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ၌မကောင်းသောအကျင့်ရှိကြောင်းအမြဲသိသော်လည်းလူများစွာ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုမမြင်တွေ့ရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်တော့မှလှိမ့်မည်မဟုတ်။ LD
ကျွန်တော့်မှာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာ ၀ န်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒီရူးနေတဲ့ ED ရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့နှစ်အတော်ကြာစကားများခဲ့တယ်။ ငါဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Viagra ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာကပြatနာကိုဖြေရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူး၊ သူသဘောမတူနိုင်တာကိုလည်းငါသိတယ်။ ကောင်းပြီ, ငါမကြာသေးမီကသူနှင့်အတူစကားပြောနှင့် YBOP ရည်ညွှန်း, သူသည်မကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းနည်းဆွေးနွေးငြင်းခုံအတွက်ရှုံးနိမ့်ဝန်ခံခဲ့သည်။ နောက်ပြီးသူနဲ့သင်ဟာဂယ်ရီရှေ့ဆောင်လုပ်နေတဲ့ဒီအလုပ်သစ်ရဲ့အနေအထားကိုလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကယ်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ မင်းတို့နှစ်ယောက်လုပ်နေတဲ့ဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတဲ့၊ ရဲရင့်တဲ့အလုပ်ကို - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ GT
သင့်အတွက်မြန်ဆန်သောမှတ်စု - သင်၏စုံစမ်းမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုကိုဖော်ပြလိုပြီး၎င်းတို့အားရှင်းလင်းပြတ်သား။ လက်လှမ်းမီသည့်နည်းဖြင့်မျှဝေခြင်းအပြင်၎င်းတို့ကိုတင်ပြရန် TED စင်မြင့်သို့စာသားအတိုင်းသွားလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးတ ဦး တည်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MA
(အသက် ၃၈ နှစ် - ED ပြန်လည်နာလန်ထူ) သင်ယခုသင်လုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်များအားလုံးနှင့်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုခုရရှိရန်ကြိုးစားခြင်းထက်စကားလုံးပြန့်ပွားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ငါ့ကောင်မလေးအသစ်ကမင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပြproblemsနာတွေကိုဆက်လုပ်နေရင်ကျန်တစ်သက်လုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါ။ ငါသာယာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ့်အလားအလာကိုမေ့ပြီးအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စကိုငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပြီးစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ က။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည် MRI ကဲ့သို့သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၊ ကျောရိုး - ကျောရိုးအရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ endocrine ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အာရုံကြောကူးစက်ခြင်းလေ့လာမှုများ (electromyograms) ကိုရူပဗေဒပညာရှင်၊ လိင်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုအကြောင်းငါ့ကိုတစ်ယောက်မှမမေးခဲ့ဘူး။ ငါဒီမှာတကယ့်ပြproblemနာရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ ထိုက်တန်သောအရာအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်လည်းထိုစကားလုံးကိုပျံ့နှံ့စေရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအင်ဖို။ ငါက၏တန်ချိန်ဖတ်ပါတယ်။ ငါဖတ်တယ် သူအပေါငျးတို့တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများ် .pdf ဖိုင် ထိပ်ကနေအောက်ခြေ, စကားလုံးများအတွက်စကားလုံးဖြစ်သည်။ AG က
ငါ၏အရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေအတွက်ပြသ ကို TED Talk ကိုဗီဒီယိုက.ဗွီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာငါတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကားပြောဆိုမှုတစ်ခုရှိတယ်။ အဆုံးမှာတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောင်းလဲဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြတယ်။ ငါအခုဒီကင်ပိန်းမှာ wingman ရှိတယ်။ TEDTALK ရဲ့အကြီးမားဆုံးငွေပေးချေမှုတစ်ခုကကျွန်မရဲ့ပြproblemနာအတွက်ရှက်ရွံ့ခြင်း၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ အဲဒါကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနဲ့ဒီအကြောင်းပြောဖို့အဆင်ပြေစေတယ်။ ကျနော်တို့မနေ့ကထိုကဲ့သို့သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနေ့ကရှိခဲ့ပါတယ်! ငါတို့ဟာအဆစ်တွေကိုဆေးလိပ်မသောက်ရတော့ဘူး၊ VGs နဲ့ TV နာရီတွေအဆုံးမှာကစားတယ်။
13 ကဒီမှာရက်သတ္တပတ်များနှင့်မပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြီးနောက်ကျွန်မဦးနှောက်ကိုဓာတုဗေဒအခြေခံတဲ့အများကြီးပိုကောင်းလက်တွေ့ကျတဲ့နားလည်မှုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်အမျက် ထွက်. / စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘယျသို့အပြောင်းအလဲလိင်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများကနေဖြန့်ချိသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားရန်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဘယ်အရာကို, ငါ့စိတ်ခံစားမှုအနည်းဆုံးအခြေခံအသိပညာရှိသည်။ အသိပညာတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ FC အသင်း
တနေ့ကျရင် YBOP မှာ“ Rebooting” သတင်းအချက်အလက်ကိုကျပန်းရှာဖွေမှုတစ်ခုကနေရှာတွေ့ပြီး၊ ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့ငါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး YBOP တွင်ဗီဒီယိုစီးရီးများနှင့် ဦး နှောက် - ဓာတုဗေဒရှင်းပြချက်များကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီသည့်နားလည်မှုကိရိယာများကိုပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ငါ P ကို ​​/ M / အိုအခမဲ့ 70 ရက်ပေါင်းဖြစ်၏။
စွဲလမ်းပေါ်တွင် YBOP vid စီးရီးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ငါကအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ညမ်း / လိင်စွဲစေနိုင်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကြိုးများမှာရုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သင်ယူခဲ့တယ်။ (သင်သည်ငါစုစုပေါင်း deviant ငါမဆိုလို ??) ဤသစ်ကိုနားလည်မှုချက်ချင်း (နှစ်ပေါင်းများအတွက်) လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့်ချိတ်ဆက်ခံတော်မူပြီးမှ၏အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်နောင်တတင်ဆောင်၏စိတ်ကူးကိုယူလေ၏။ ဒီ p / m / o အပြုအမူပုံစံဦးနှောက်ဓာတုဗေဒဆင်းလာအများကြီးဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုတစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အစွဲအဆုံးသတ်စဉ်းစားရန်ကူညီပေးခဲ့သည်သောအရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု။
ကျွန်ုပ်၏အစောပိုင်းစိုးရိမ်မှုများကိုအစားထိုးသောတကယ့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်ခံစားချက်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အတ္တဆန်သောကမ္ဘာအားပိုမိုဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဂရုစိုက်တတ်သောလောကသို့အသွင်ပြောင်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်လိင်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုမယူမှတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အားလုံးထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မိလို့စိတ်ထဲမှာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ ကောင်းသောအရာများသည်အချိန်တန်လျှင်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် အနားယူ၍ တစ်နေ့တာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ ပိုမိုတာ ၀ န်ခံမှုရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းနိုင်သည်။ AJ
နောက်ဆုံးအပိုင်းအစတစ်ခုပါသောပဟေlikeိကဲ့သို့သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှကျွန်ုပ်ကိုခြေတစ်လှမ်းလှမ်း။ 'ကြီးမားသောရုပ်ပုံ' ကိုကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းကိုပေးခဲ့သည်။ ရိုးသားမှုအရအရင်တင်ခဲ့သောသူများနှင့်ဂယ်ရီထံသို့ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကယ်တင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိူင်သော်လည်းဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏စကားများမပါဘဲ၊ အချစ်၊ အလိုဆန္ဒနှင့်ဆွဲဆောင်မှုတို့၏အဓိပ္ပာယ်အစစ်အမှန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့လမ်းပြန်လျှောက်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကီလိုဂရမ်
ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်သည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟုအစဉ်အမြဲထင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အခြားတစ်ဖက်မှဖြစ်မည်ဟုဘယ်သောအခါမျှမတွေးခဲ့ပါ။ ကိုယ့် prefrontal cortex အပေါ်စွဲလမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းအနည်းငယ်ဖတ်ပြီးပြီငါအံ့သြမိပါတယ်! အခုငါထပ်မံဖတ်ရှုဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါအရမ်းအလုပ်များနေတယ်။ ဒီ site ကိုငါမရှာခဲ့ရင်ငါ neuroplasticity, dopamine cycle နဲ့ဒီအရာတွေအကြောင်းမကြားဘူး။ အရာအားလုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတာဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ပေါင်
ငါသိ။ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အဘယ်ကြောင့် ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာငါ့ရဲ့ကျောကုန်းပေါ်ကနေအရှက်ရစေခဲ့တယ်။ ဒီစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအားလုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာတာကိုနားလည်မှုနဲ့အစားထိုးသလိုပဲ။ အက်စ်အက်စ်
ပြီးခဲ့သည့်လကငါ့ reboot ပြီးစီးခဲ့သည်။ Unreal …ဘ ၀ ဟာအခုနဂိုအသက်ရှင်နေပြီ။ သင်ကလူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပညာရှင်ဂယ်ရီပါ။ thisthreat ထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ကြားရန်ပညာရေးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အားရရွှင်လန်းမှု! CJ
ငါကရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်အံ့သြဖွယ်အရင်းအမြစ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ချင်တယ်; ၎င်းကိုအခမဲ့ ပေး၍ နှင့်စွဲလမ်းနေသူများကိုကူညီရန်ကြင်နာစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါ 15 နှစ်လောက်ကြာအောင်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းခဲ့တယ်၊ ဒီနေရာမှာရရှိနိုင်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲတိုးတက်မှုတစ်ခုခုရရှိနိုင်တယ်။ ငါနေဆဲနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ရုန်းကန်နေတုန်းပဲ။ သို့သော်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်နှစ်များအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာထက်ပိုမိုသောတိုးတက်မှုများကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်ရေးကိုပြောင်းလဲဖို့ကူညီနေပါတယ်။ မိုင်
သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက် - ဤအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အချို့သောအပူရှိန်ကြောင့်၎င်းသည်အချို့သောအမှန်တရားသည်၎င်းအားဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။
ငါ porn-related ED အတွက်ကုထုံးဆရာတစ်ယောက်ဆီကိုသွားလည်တဲ့အခါသူကသူမရဲ့လင့်ခ်ကို MedHelp မှာချည်နှောင်ထားခဲ့တာပေါ့။ သူကကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာသာမကတကယ်ပြသနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကိုသွားတဲ့လူတွေအများကြီးကိုသူအံ့သြသွားတယ်။ များစွာသောကုထုံးဆရာများသည်သူတို့၏အလုပ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အချိန်မတိုင်မီအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများ၏လေ့ကျင့်မှု / အတွေ့အကြုံအပေါ်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုအခြေခံထားဆဲဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ယူကေရှိ 'ဟောင်း skool' ကုထုံးဆရာများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထောက်ခံမည့်အစားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သူမငါ့ကိုသင်ပေးတာထက်ကျွန်မရဲ့ကုထုံးကိုသူပိုသင်ပေးတာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူမသည်လခရခဲ့သည်။ ဒါဟာယုံကြည်မှုသူတောင်းစား! သူမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ဒါကအတော်လေးအသစ်သောဖြစ်ရပ်ဆန်း။ မင်းရဲ့အားထုတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် RB
YBOP, YBRed နှင့်ဒီဆိုဒ်ကိုတွေ့ရတာ ၀ မ်းသာပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဝေးကိုထက်ဝက်လောက်တောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ RF
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှု၏အဓိကကျသောအချက်မှာ YBOP ၏သဘောတရားများကိုအပြည့်အဝနားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ပြောတာကိုသင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် PMO ကမင်းကိုပေးတဲ့ကင်လုပ်ခိုင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြောက်ရွံ့လိမ့်မယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုလာလိမ့်မယ်, သောဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကတကယ်တော့ငါ့အတွက်အကြေးခွံတွေဖြည့်ပေးခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ - သေခြင်းမှပြန်လာသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယင်းငရဲငါသည်ဤကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တက်အဆုံးသတ်အဘယ်ကြောင့်ငါသိဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ငါတောင်များကဲ့သို့ဘာမှမရှာနေသတိရကြပါဘူး။ သို့သျောလညျးကငါ့ကိုငါစွဲလမ်းခဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုပုံစံလူအများစုမေ့မေ့လျော့လျော့ပုံရသည်တစ်ခုခုအတှကျအကြိုးကူညီပေးခဲ့တယ်နားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဘယ်အမှုအရာ rebalancing အားဖြင့်ရနိုင်ပုံကိုကောင်းလှ၏။ 10 ရက်သတ္တပတ် rebalancing, နက်ဖြန်နေ့က 14 ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့တစျခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးကယ့်ကိုအကောင်း Feeling ။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပေမယ့်သိသာအော်ဂဇင်ကိုငါ့အသွေးအားဖြင့်စီးဆင်းနေသည်လိုပဲ။ ကိုယ့်ကိုတကယ်လုံ့လရှိသူနှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားကြရသည်။ ကို MB
ငါဒီမှာအများကြီးဖတ်နေကြပြီးငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ neuroplasticity နှင့် dopamine (ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝအသစ်အဆန်းဖြစ်သော) အကြောင်းမလေ့လာမီကျွန်ုပ်သည်ငရဲအဖြစ်ကြောက်ခဲ့သည်။ ယခုသင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သမဝါယမ
မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အကူအညီမပါဘဲငါဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းလာမည်မဟုတ်ဟုငါပြောရပေမည်။ မင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုငါဘယ်လိုထိမိလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ FD
သင်၏သုတေသနနှင့်အထောက်အပံ့ပေးတတ်သောကြင်နာတတ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ နောင်လာမည့်နှစ်များအတွင်းဤ site သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်သန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်လိမ့်မည်သေချာပါသည်။ JS
မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်လဲ။ ငါသတ္တုတွင်းပေါ်မှာဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်လည်းယောက်ျားအတော်များများကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည် - မကောင်းသောစိုးရိမ်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပြproblemနာရှိသောသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာပေနှင့်လိင်စိတ်မပြည့်ဝသည့်လိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်ကူးမကြည့်ဘဲအခြားတစ် ဦး ။ Eary ရဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းဂယ်ရီရဲ့ဆလိုက်ရှိုးအပိုင်းတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးတကယ်ကိုကြိုက်တယ်။ ဖောက်သည်များလည်း၎င်းမှအကျိုးခံစားကြရသည်။ WM LCSW DST (လိင်ကုထုံးပညာရှင်နှင့်စာရေးသူ)
ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုခဏတာရှာဖွေနေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့မကျန်းမာတဲ့အလေ့အထတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့တခြားယောက်ျားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းအံ့သြမိတယ်။ ငါဒီအရာအားလုံးကိုမဖြစ်အောင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် libido ဆုံးရှုံးမှု၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းစသည်တို့ကိုကြောက်ရွံ့မိမှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုတွေ့ရတာကောင်းတယ်။ သတိရဖို့တော့ porn ကိုပြန်မသွားတော့ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမန်လူပဲ ဝဘ်ဆိုက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကငါ့ကိုအများကြီးအများကြီးပြုလိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ KC
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်ပြောလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆန့်ကျင်သူမဟုတ်ပါ (သို့မဟုတ်) erotic ဖြစ်သည့်အမှန်တကယ်အနုပညာလက်ရာကိုရှုတ်ချရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုပ်ရှားမှု။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်နှင့်သင်၏ခင်ပွန်း၏လုပ်ငန်းသည်လေကောင်းလေသန့်ဖြစ်သည်။ NC
ဤသည်ပစ္စည်းငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီ! ငါ 13 ခဲ့ကတည်းကလူမှုတော့ပူပန်ခံစားခဲ့ရနှင့်တဖြည်းဖြည်း (ယခု 26 နှစ်) ပိုဆိုးရတဲ့ပါပြီ။ ဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲစရာပြီးနောက် သင့်ရဲ့ဆောင်းပါး ငါကရိုက်ချက်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သငျသညျ ဦး ခေါင်းပေါ်လက်သည်းထိမှန်ငါပဲငါ့အသက်တာအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ဘို့သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်! မင်းရဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းငါ http://www.socialanxietysupport.com/forum မှာရှိတဲ့ငါ့ရဲ့ထောက်ခံအားပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောပြတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်များကြောင့်ဤပြproblemsနာများ (လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုနှင့်စိုက်ထူခြင်းပြcausingနာများ) ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်အမြဲခံစားခဲ့ရသည်။ medhelp.com ရှိဆရာဝန်များကိုပင်မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးကကျွန်တော့်ကိုရယ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာတယ်၊ မင်းဟာမင်းကိုပိုပြီးသက်ရှိထင်ရှားအများကြီးသက်ရောက်မှုရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! AT
ဗဟုသုတကဒီညစ်ညမ်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုရိုက်နှက်ဖို့သော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ် ငါပြrealနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုမသိခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအစစ်အမှန်အောင်မြင်မှုနည်းနည်းလေးနဲ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆီသို့ကျွန်မရဲ့တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒီ site ကငါ့ကိုဒီနည်းနဲ့အနိုင်ယူပြီးချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ WF
မင်းရဲ့ TED ဟောပြောချက်ကိုမြင်ရုံတင်မကဘူး။ သင်၏တင်ဆက်မှုစွမ်းရည်တွင်သင်၌ထူးခြားသောအသံနှင့်အသစ်၊ ရိုးရာအမှားတွေကမင်းကိုအားမပေးပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအားကောင်းတဲ့၊ သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အရှိန်အဟုန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမိခဲ့လို့ပါ ခင်ဗျားဟာနှိမ့်ချသူကိုတွေ့ပြီးပရိသတ်ကို“ သူငယ်ချင်း” လိုမျိုးတွေ့တယ်။ နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သငျသညျလူတစ် ဦး ခြားနားချက်စေ။ သငျသညျစွဲအပေါ်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့ထောင့်တ ဦး တည်းကိုလေ့လာ, ထိုသို့အလွန်အရေးကြီးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နေတဲ့နည်းနဲ့ဆုလာဘ်တိုက်နယ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်မှာလုပ်ခဲ့တာလဲ။ လူတစ် ဦး သည်စင်ကြယ်သောလူနေမှုပုံစံသို့ပြန်လာသောအခါသတင်းစကားသည်“ အသစ်” ဖြစ်သည်ကိုကြားသောအခါတရားစီရင်ရေးစင်တာများသည်ချို့ယွင်းချက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ JB
ကျေးဇူးတင်ပါသည် Marnia နှင့်ဂယ်ရီနဲ့ကျွန်မကဒီမှာလေ့လာသင်ယူအရာအားလုံးတို့အတွက်ဆိုက်အသုံးပြုသူအရာကြွင်းလေ။ ဒါဟာတကယ်အကြှနျုပျအဘို့မျက်စိ-အဖွင့်အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ TH
ဤသည်အံ့သြဖွယ် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ PMO နှင့်ငါ့စွဲကျော်လွှားရန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ် (ငါငါ့အ 40 နှစ်အစောပိုင်း၌ရှိ၏) ။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်အဆင့် ၁၂ ဆင့်နဲ့ချဉ်းကပ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ လိင်စွဲလမ်းသူ” လို့ခေါ်ခြင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနိမ့်ကျနေပြီလို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါကငါ့အစွဲလောင်စာထင်သောအပြစ်ရှိတယ်နှင့်အရှက်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့သလိုပဲ။ ငါမကြာသေးမီကစောင့်ကြည့် Your-ဦးနှောက်-on-ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ နှင့်စွဲမှုအတွက်အာရုံကြောအခြေခံကိုနားလည်သဘောပေါက်လာမှအရှက်ကွဲခြင်းများစွာကိုသက်သာစေခဲ့သည်။ အခုငါ့ PMO စွဲစွဲလမ်းမှုကငါ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားထက်ငါ့အာရုံကြောနှင့်ပိုပြီးဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာငါသိပြီ။ ငါနှစ်ပေါင်းရပ်တန့်ဖို့လိုပါပြီ။ WD
ရပ်ရွာ၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားမှုအတွက်ဂယ်ရီကိုပါကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏သုတေသနနှင့် PMO တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များရှိသည်ဟူသောသတင်းစကားကို ဆက်လက်၍ မြှင့်တင်ခြင်းအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ခင်ဗျားဟာအသက်အရွယ်မရွေးလူကြီးသူမများနှင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောရင်းမြစ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
Edit: ငါဒီပြproblemနာကိုငါ့ကုထုံးအားဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမကြားဖူးဘူး ဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကိုပညာပေးရန်အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုထိရောက်သည့်ရိုးရှင်းသောသဘာဝဆေးတစ်လက်ရရှိပါကထောင်ပေါင်းမည်မျှ ED ဆေးများသို့မဟုတ် Testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်နည်း။ ၎င်းသည်ဆေးဝါးကြီး ($$$) အတွက်အလွန်ကောင်းသော်လည်းဝေဒနာသည်များအတွက်အလွန်ကြောက်သည်။
ပိုမိုငါဇီဝဗေဒအကြောင်းကိုငါ့အဦးနှောက်ကိုနားလည်, ငါ့သဘာဝအလိုဆန္ဒများကိုပိုငါက porn တပ်များ၏ဤပြည်နယ်အတွက်လုံးဝ ensconced ဖြစ်လာဖို့နီးပါးဆယ်နှစ်ကောင်းကောင်းငါ့ကိုယူသော်လည်းငါသည်ဤကြောက်မက်ဘွယ်သောကန်နိုင်လိုပဲငါခံစားရကြောင်းနားလည်လာကြပြီ ငါ၏အလက်ချောင်းများ၏ရုံဒင်္ဂတွေနဲ့အလေ့အကျင့်။ ဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာအချို့အလွန်သိသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်: ငါ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ငါ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းသကဲ့သို့ကောင်းစွာအာရုံစိုက်ပြန်လာမယ့်နေကြသည်။ GB အထိ
ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်သိမြင်လာသောအခါ၊ သူတို့၏လက်တွဲဖော်များအားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေသတ်ခြင်း၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိန်းကလေး / ခင်ပွန်းသည်ဟာဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းနေရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်ပါသည်။ သို့သော်ထိုအမျိုးသမီးများအားသင်ကြားခြင်းမခံရပါ။ သူတို့ကနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံကိုမသိဘူး။ အကယ်လို့ဒီအချက်အလက်တွေရရှိရင်၊ လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကံကောင်းတာကဒီဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော့်ရည်းစားဖတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်၊ ပြီးတော့သူတို။ စကားလုံးတိုင်းကိုသူနားလည်တယ်။ သူမကကျွန်တော့်အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိထားမိပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။ သူမငါ့ကိုမနက်တိုင်းဖုန်းဆက်သည်။ သူသည်သူမကိုချစ်သည်ဟုပြောရုံတင်မဟုတ်ပါ။ သူမပြောတာက“ ကောင်းမွန်သောနေ့ဖြစ်ပါစေ” လို့ပြောတာနဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းရစေပါတယ်။ KT
ဒါဟာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲယခုနီးပါး5လအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကယောက်ျားတွေငါပင်ငါစွဲလမ်းနှင့်မည်သို့ကို restart အချို့စွမ်းအင်နှင့်ဘဝကိုပြန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သဘောပေါက်တဲ့ BIG အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီ website အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ဖော်ပြသင့်အိမ်မှအချို့ကိုသင်ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုပေးပို့နိုင်အလိုရှိ၏။ BF
ကိုယ့်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျပြွန်ပေါ်တွင်သင်၏ဆွေးနွေးချက်ကိုမြင်သောအခါငါ့နှလုံးဆင်းကြလေ၏။ ငါငါ့အအစောပိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအနှစ်လျော့ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကတခြားယောက်ျားသည်ငါ့အသက်အရွယ်မှဒါကွဲပြားခြားနားခဲ့တာဘာကြောင့်ကိုယ့်နောက်ဆုံးတော့တွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းခဲ့သောသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသူတို့ပင်အပျိုဖော်ဝင်ဝင်တိုက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာရှေ့မှာသာကလေးတွေယခုညစ်ညမ်းပေါ်သို့ရတဲ့နှင့်အတူပိုဆိုးလိမ့်မယ်စိုးရိမ်နေကြသည်။ ရုံကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်နဲ့ကိုယ့်ကိုသင်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အခြားလူတိုင်းအတွက်ထွက်ရှိပါတယ်ဤအချက်အလက်ရတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်။ Ng
www.yourbrainonporn.com ငါ့ထံသို့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရွှေမိုင်းခဲ့ငါတကယ်ပဲစာရေးဆရာကျေးဇူးတင်ချင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ * တကယ် * ဆိုလို; ဒီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်သွား
မကြာသေးမီကသူ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကြောင့်စေ့စပ်ထားသူသည်သူမအပေါ်လုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ငါ YBOP နှင့် desensitization, dopamine, အသစ်အဆန်းနှင့်အခြားယေဘုယျသဘောတရားများအကြောင်းကိုသူမ၏ပြောပြသည်။ နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုပျံ့နှံ့စေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သူမနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင်မယူသင့်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုဇီဝကမ္မစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရှုမြင်သင့်ကြောင်း၊ သူမကိုယ်တိုင်သူမ၏တိုးတက်မှုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရမခံစားနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသူမရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ငါက porn နဲ့ငါရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်း၊ အတိတ်ကဆက်ဆံရေး၊ သူမသည်“ သူလုပ်နေတာ / ပြောတာအတိအကျပါ” သို့မဟုတ်“ သူဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲဆိုတာ” ကဲ့သို့သောအရာများကိုသူဆက်ပြောသည်။ PH
လူများတို့သည်မှန်ကန်သောအချက်အလက်ကိုပေးခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာမှတဆင့်သွားကြဖို့သူတို့ကိုအားပေးအားမြှောက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်ကလက်ခံပြီးကတိုက်ခိုက်နေတော့ဘူး။ ငါသည်ငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူကျော်မကျမည်အကြောင်းငါသိ၏။ ဒါဟာငါ porn ၏မူးယစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့မဟုတ်စေတဲ့ဘဝတာရှည်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါကပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့တွေ့မြင်သဖြင့်, မတရားသောနှင့်ရမ္မက်ဟာသူတို့ရဲ့အာဏာကိုဆုံးရှုံးဖို့စတင်ရန်ရှိသောကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိသည်။ TD
ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လုံးဝဆန့်ကျင်သောနတ်သမီးဖြစ်သည်! ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲသို့သင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်သောသင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောလူများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှတန်ဖိုးထားသည်ကိုစကားလုံးများကမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဗဟုသုတ၊ ပံ့ပိုးမှု၊ ခွန်အားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် Porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ဆိုးကျိုးများမှကြီးလေးသောပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ သင်၏အကူအညီသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! BJ
အွန်လိုင်းကဒီ web site ကိုချပြီးအဘို့အသင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထမတော့ကိုယ်ကဘာသာရေး site ၏အချို့သောမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ယူဆပေမယ့်အရမ်းအဘယ်သူမျှမကဘာသာရေး overtones ကိုရှာဖွေကျေနပ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီထက်အနာဂတ်ကိုပိုမျှော်လင့်ချက်များ၏နှလုံး-နွေးပုံပြင်များပေမယ့်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့နှလုံး၏အောက်ခြေကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ TG
ငါသည်အခြားဖိုရမ်မှတစ်ဆင့် yourbrainonporn.com တွေ့ငါကငါ့အရုန်းကန်အတွက်ငါ့အဘို့ကိုမှန်ကန်ဂိမ်း changer ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ SM
မင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကငါ့ဘဝကိုတကယ်ပဲပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ကြောက်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ငါ ED ခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောငယ်ရွယ်သည့်အသက် (၂၅ နှစ်) နှင့်ကျွန်ုပ်ကြောက်လန့်ခဲ့သည်။ ငါဘယ်လိုပြီးသား ED ကြုံတွေ့နိုင်မည်နည်း ငါ့ဘဝကရှုပ်ထွေးပြီးပြီ။ ငါတကယ်ထွက် freaking ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာကျွန်တော့်ကိုပျက်ပြားစေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကမင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါ့အဖြေကိုတွေ့ပြီ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအဖြေကိုသာမကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းကျွန်ုပ်ဖြေကြားခဲ့သည့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုပါတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခင်ဗျားသိတာပေါ့၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်အတွင်းမှာငါတစ်ခုခုမှားနေတာလို့ထင်ခဲ့တယ် အစဉ်မပြတ်ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ ငါဘာကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိရတာလဲနားမလည်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့မိန်းမတွေ၊ လူတွေကြားမှာအဆင်မပြေတာတွေဘာကြောင့်လဲ။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ စိတ်ပညာရှင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဖြတ်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်း၊ ကလပ်များသို့ ၀ င်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်မိမိအထောက်အကူပြုစာအုပ်များစွာကိုဖတ်ရှုခြင်းစသည့်အရာများစွာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ယခင်ကထိုသို့သောလူမှုရေးနှင့်အထွက်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါခဏတာပြီးနောက်လူတွေအကြားအမြဲအဆင်ပြေရနိုင်ဘူး။ လူတွေအားလုံးရယ်မောအောင်အပြင်းအထန်လုပ်လေ့ရှိတယ်။ လူတွေပြုံးလိုက်တဲ့အခါငါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စေလိမ့်မယ်။ ငါသည်ဤ "ခံစားမှု" ရှိခဲ့သိတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကစိတ်ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူး၊ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးတစ်စားတည်းလည်းမစွဲခဲ့ဘူး။
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်များစွာသောဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုပြီး PORN သည်ကျွန်ုပ်အားဘာလုပ်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ပြီးနောက်။ ယခုငါ PORN သည်ငါ့ဘဝထဲသို့ပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလဲသွားသောအခါ (၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်) ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ခြေရာခံမိသည်။ အပြုံးတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငါသတိထားမိခြင်းမရှိဘဲဖြည်းဖြည်းချင်းအထီးကျန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယောက်ျားတွေအားလုံးသုံးနေတဲ့အချိန်ကစပြီး porn ဟာပုံမှန်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုဆုံးမသွန်သင်ဘယ်တော့မှသောပညာရေးကွာဟချက်နှင့်ပြည့်၏။ AG က
PMO ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်သိသော်လည်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါ။ ဂယ်ရီ၏ဗွီဒီယိုများမှအချက်အလက်များကကျွန်ုပ်အား 'အေ့' 'အချိန်ကိုပေးသည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေထောက်ခံချက်တွေကကျွန်တော့်ကိုအမှားပြင်ဖို့ခွန်အားပေးနေတယ်။ BH
ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မယုံနိုင်လောက်အောင်သိကောင်းစရာများဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဒါဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအလွန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဆရာဝန်
ငါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသတိထားမိ။ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်သောကဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ပစ္စည်းအတွက်မျှရောင်းဝယ်ရန်မစဉ်းစားမိပါ။ ငါအများကြီးတိုးတက်မှုလုပ်ခဲ့တယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းရဲ့ site ကနေသိခဲ့ရတယ်။ မင်းဆီကနေငါသင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်။ JW
မင်းရဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။ သင်၏ကြီးမားသောပညာရေးကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါတို့စာအုပ်အသစ်ထဲမှာမင်းတို့ကိုးကားတယ်။ , သင်နှစ်သက်သော Porn မုန်းတယ်။ MC
ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့တဲ့အခါအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ၎င်းသည်လုံးဝတောက်ပပြီးကျွန်ုပ်၌တစ်ခါမျှမစဉ်းစားမိသည့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုနားလည်စေသည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မရှိရင်ငါ porn နဲ့ masturbation ကိုရပ်တန့်ဖို့လေးလေးနက်နက်ခရီးသွားနိုင်မယ်ဆိုတာသံသယဝင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂
ငါဒီမှာသတင်းအချက်အလက်များအတွက် Marnia နှင့် Gary အလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ PMO သည်ကျွန်ုပ်၏အရည်အချင်းများကိုပျက်စီးစေကြောင်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အမြဲသိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ပြproblemနာရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ရန်ကျွန်မဘယ်တော့မှစဉ်းစားမိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းယခုတွင်မူကျွန်ုပ်သည်သာမန်ဘဝတစ်ခုရရှိရန်၎င်းသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိလာသည်။ ဒါကကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါ။ ငါ
ကောလိပ်ကျောင်းရှိနေစဉ်ငါ Neuropsychology အတွက် majored ။ ကျနော်ကျိန်းသေဒီကိစ္စကိုတခုတခုအပေါ်မှာအခွင့်အာဏာဘူးနေစဉ်, ငါ ထိုအချိန်မှစ. အာရုံကြောသုတေသနနှင့်အတူတက်ထားရှိမည်ပွီ, ငါသည်သင်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခြင်း၏အနှစ်အပြီးပြောပါရန်ရှိသည်, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွင်, သငျသညျယောက်ျားတွေအပေါ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖြစ်ကြသည်။ ငါသိပ္ပံ articles.They အပေါငျးတို့သဖတ်နေကိုချစ်ငါက start ကနေ finish ကိုမှလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်မသွားစရာဆင်ခြေရှိသည်ဒါကြောင့်ပါစေ။ Ng
ငါကိုယ်တိုင်နှင့်သေချာသည်အတိုင်းသင်နှင့် Marnia ပြုသောအမှုမှအကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောအမျိုးသားများကြားတွင်ထိုစကားလုံးကို ဆက်လက်၍ ဖြန့်ဝေပါမည်။ RN
ငါသည်သင်တို့ကိုဤ website နှင့်အတူလုပ်နေကြအရာကိုအရမ်းရိုသေလေးစားမှုရှိသည်။ သငျသညျတညျဆောကျပါပွီဘယျလိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သယံဇာတနှင့်ရပ်ရွာ။ သင့်ရဲ့ website မှာ (s) ကိုသာမရှိရင်ငါလုံးဝအခုအချိန်မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမြော်လင့်ခြင်း, အဖြေတစ်ခုပေးထား, ငါ့ဤပြဿနာကိုလုံးဝ solvable ဖြစ်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်စေပြီ။ IG
အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါကတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါဟာငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီငါ့ကိုပိုကောင်းတဲ့လူ့ဖြစ်လျက်ရှိဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ယခုတွင်ငါသည်ပယ် logging မည်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်မှောင်မိုက်မဟာမိတ်ဆင်းမသွားပါလိမ့်မယ်။ SW
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကို ဦး စားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဂယ်ရီကိုလည်းမင်းရဲ့အားထုတ်မှုမပါဘဲငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေကိုလုံးဝမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၂ လအတွင်းကြိုးစားပြီးပြန်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ် ပို၍ ပျော်ရွှင်။ ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူဖြစ်လာသည်။ ဒီအရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းကန်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး။ လုပ်ပါ
[ED ခံစားနေရသူဝေဒနာရှင်] ငါဒီအရာအားလုံးကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်။ အသက်တာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုငါမမြင်နိုင်ဘူး၊ ဒီအဖြေကိုရှာတွေ့တဲ့အတွက်ငါကံကောင်းတယ်။ သင်၏အလုပ်သို့မဟုတ်ဤအချက်အလက်နှင့်ပါတ်သက်သည့်အခြားအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောကျွန်ုပ်တို့ရာခိုင်နှုန်းသည်အလွန်နည်းသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်။ GT
ဂယ်ရီ၊ YBOP ၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှယောက်ျားလေးများကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာအရမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်။ YG
ငါအားလုံးရဲ့သိပ္ပံကိုငါနှစ်သက်တယ်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါ့ကိုပျက်ကွက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါဟာငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာရှိနေပြီးသဘာဝကျတဲ့အရာတစ်ခုကိုအလွဲသုံးစားပြုတာကိုနားလည်လာတဲ့အခါအကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ပိုပြီးမျှော်လင့်ချက်ပိုရှိပုံရတယ်။ ဦး နှောက်ကပြန်ကောင်းလာပြီးပြန်ကောင်းလာတယ်၊ ဒါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ရတာကြောက်စရာပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ JS
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်သည်အတွေးအခေါ်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းများစွာဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ Tolle, Fromm နှင့်အခြားစိတ်များကကျွန်ုပ်တို့၌စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်ပေးသည်ကိုအလင်းဖြာပေးသောအခြားသူများမှကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့ပုံကိုကွဲပြားသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်အားအလေ့အထများကိုပြောင်းလဲစေလို။ တစ်ခုမှာ PMO ဖြစ်သည်။ ငါရှောင်ရမည့်အရှိဆုံးမှာ ၃-၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ငါမတူကွဲပြားတဲ့ combo တွေအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ P နဲ့ M မလုပ်ခဲ့တာ၊ MO နဲ့ MO မရှိဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မူးရူးသွားရှာတွေ့လိမ့်မယ်။
စိတ်ထဲပေါ်ရှိဤအချက်အလက်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမကူညီနိုင်ပါ။ ထိုအခါငါ YBOP ကိုဖြတ်ပြီးလာ။ ထိုအကြောင်းအရာအပေါ်အသစ်တစ်ခုအလင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာ (သိပ္ပံနည်းကျ) စိတ်ကိုကိုယ်နှိုက်၏ဘာသာရပ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ Godzilla နဲ့ Mothra တို့ဟာ MPO ကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်သလိုပါပဲ။ AN
ငါဒီ site မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်ရူပဗေဒသိပ္ပံတွင်ရှိသဖြင့်ဤပြtoနာအတွက်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုကျွန်တော်တကယ်တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ အသိပညာသည်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ LG
ဤလွန်ခဲ့သောလေးလသည်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်းအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်။ ငါ PMO ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ငါက "မကောင်းတဲ့" လူတစ် ဦး မဟုတ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပါပြီ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကသူတို့ပေးတဲ့ခံစားချက်ကောင်းတွေကြောင့်ပဲပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူး ဒီနေ့နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သော ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအချို့ကိုကျွန်ုပ်သာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းအားအပြစ်ရှိသည်ဟုမခံစားရခြင်းသည်ရန်ပွဲကို ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်ဟုထင်စေသည်။
ဒီတော့ငါနဲ့တူရုန်းကန်နေရတဲ့အပြင်ကမင်းသားတွေကိုငါပြောချင်တာက "နင့်နေပါ ဦး၊ ပိုကောင်းလာမယ်" အရာရာသည်ဤအရပ်မှမည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်အသိပညာနှင့်သင်ယောက်ျားများ၏အတွေ့အကြုံများသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဟန်ချက်ညီမှုကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်အားယုံကြည်မှုနှင့်နားလည်မှုများပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါ။ MB
YBOP ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကမ္ဘာပြောင်းလဲနေတဲ့။ DC က🙂
ဒီ site အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားဒီမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အချိန်နဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ငါရက်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံးသန့်ရှင်းနေပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲသိပ္ပံကိုအလွန်အားကိုးနေပုံရသောကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ် site တစ်ခုမှာ YourBrainOnPorn.com ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်အပေါ်မလိုလားအပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေပြီးထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန်အကြံပြုချက်များကိုပြတ်သားစွာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှင်းပြသည်။ Em & Lo (ဘလော့ဂါများ)
ဒီ site နဲ့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ရှေးရှေးအုပ်စုကြီးကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်ဤနေရာတွင်ဖြန့်ဝေသောသတင်းအချက်အလက်များကြောင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ LD [သူ၏ ED ပြန်လည်ကောင်းမွန်]
ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတင်ပြီးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမျှတစွာမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပြောတာ။ မည်သူမဆို porn-related EDand ကိုတွေ့သောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအင်တာနက်သွားသည်၊ မည်သည့်အကူအညီမှမဆိုလက်နှင့်ခြေထောက်အားသွင်းနေသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သန်းပေါင်းများစွာကိုသူတို့ရှာဖွေသည်။ ကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်လုပ်နေတယ်။ PT
ငါ့အဘို့ဂယ်ရီ high-ငါးခု Give သူ rocks သူ့ကိုပြောပြပါ။ ငါကဆိုလိုနှင့်တလေးတစား JG 🙂
ကျွန်တော်အိန္ဒိယကပါ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြားညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၃ နှစ်ရောက်သောအခါဘဝသည်အလွန်နိမ့်ကျနေကြောင်းသဘောပေါက်လာသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျော်လွှားရန်အမှန်ပင်ကူညီပေးခဲ့သည် ကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏထောင်ချောက်ဟောင်းများကြုံတွေ့ရသော်လည်းအနည်းဆုံးယခုသင်နှင့်ယောက်ျားများနှင့် 'UNCLE BOB' 🙂 IV တို့၏ကျေးဇူးကြောင့်စစ်တိုက်ရန်ကြိုးစားသည်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်! ဒါဟာကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MM
အဆိုပါ YBOP ဗီဒီယိုများနှင့်တစ်ဦးလေးနက်စွဲအဖြစ် porn ၏တိုးမြှင့်အသိအမြင်သည်ငါနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်; ချက်ချင်းစွန့်ပစ်နောက်တဖန်မကြည့်ရှုခြင်းကိုခံရဖို့ 999 တခြားသူတွေနဲ့အိုဘို့ရွေးကောက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးတည်းသာအရာများ၏နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝအ drives တွေကိုလင့်ခ်နှင့်တထောင်ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကို (နှင့်မိတ်ဖက်) ၏ dopamine သက်ရောက်မှုများအထူးသဖြင့်အယူအဆ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ PMO၊ နာရီပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကုထုံးနှင့်ယေဘုယျဆက်ဆံရေး 'hell' များမကြာခဏဖြစ်ပြီးနောက်ဤအယူအဆများသည်ကျွန်ုပ်အားသတင်းမှားများနှင့်အသုံးမကျသောဗဟုသုတများရှိသောပင်လယ်မီးပြတိုက်တစ်ခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုပြောကြသည်။ ငါတစ်နှစ်ပတ်လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအာရုံမစိုက်ခဲ့ပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်မူးယစ်ဆေးစွဲပြီးနောက်ကျွန်တော့်ဆင်ခြင်တုံတရားစိတ်က၎င်းကိုကောင်းသောအရာအတွက်စွန့်လွှတ်ရန်အချိန်တန်ပြီ (မဟုတ်ရင်ငါအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောဆက်ဆံရေးမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဟုငါခံစားရသည်) ကိုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်း imho သည်ဤပြissuesနာများကိုလျင်မြန်စွာနိုးထရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းနှင့်အင်တာနက်လွှမ်းမိုးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ TF
သင့်ရဲ့ site ကိုကြီးလှ၏။ ငါသည်ဤခေါင်းစဉ်ကိုရည်မှတ်မြင့်အနိမ့်ကိုရှာဖွေ, ထိုသို့ကျိန်းသေအစဉ်အမြဲငါတွေ့ရသောအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ MJ
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုငါတွေ့ခဲ့သမျှအချက်အလက်အားလုံးမှလိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စွမ်းအင်များစွာရရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုအများကြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းအပိုင်းခြောက်ပိုင်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဂယ်ရီ။ ငါထင်တာကစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ dopamine receptors တွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဒီစနစ်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော့်အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအချက်က။ အဆိုပါစီးရီးငါ့ကိုပိုကြီးတဲ့ပုံကိုရစေ၏။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အထက်မှအခြေအနေအားလုံးကိုကြည့်နိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။ DI
ကျွန်ုပ်၏ ED သည် porn အသုံးပြုမှုကြောင့်ဟုအမြဲတမ်းသံသယရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲကတစ်ခုခုကမှောင်မိုက်တဲ့ထောင့်ကငှက်ငယ်တစ်ကောင်လိုအကူအညီတောင်းဖို့ပြောတယ်။ အခုဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုငါတွေ့ပြီဆိုတော့အဲဒီအသံဟာမှန်ကန်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ ဒီအိပ်မက်ဆိုးကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံစေပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေကိုနားလည်ပြီးအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောသူတစ် ဦး ရှိ၍ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအစာရှောင်ရာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်, porn ပေး, ကြှနျုပျတို့လွဲချော်သွားတာအခါထက်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Viagra ရောင်းချရန်ကြိုးစားပါ။ ဤလူမျိုးကိုမပါဘဲပျောက်သွားနိုင်သောအခြားနက်ရှိုင်းသောအနက်ဆုံးသောတွင်းကယ့်ကိုသူတို့အဖို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြသည်။ ကျနော်တို့လူတွေအကြောင်းကြားရမည်။ ငါ့နှလုံး၏အောက်ခြေကနေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ jo
ဒီ site အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွန်ခဲ့သော ၁၄၈ ရက်က (ကျွန်ုပ်သည်အချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာရှိခဲ့သည့်) သင်၏ရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတပ်မက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်လိုခဲ့ပါ။ ဦး နှောက်ပေါ်ကဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲဒီနေ့ကပဲထွက်လိုက်ပြီးနောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်ဆွီဒင်တွင် ၃၂ နှစ်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး ပါ။ SG
ငါတဦးတည်းလက်၏လက်ချောင်းအပေါ်အမှန်တကယ်ကျိုးနပ်သည်အင်တာနက်ဆိုဒ်များများ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်နိုင်ပြီး, ဥစ္စာသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ TK
ကျွန်တော့်ဟောင်းနှင့်အတူအိပ်ခန်းထဲ၌ပြproblemsနာများရှိပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် Yahoo Answers ကိုသွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆင်တူသောပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသောလူများကိုရှာဖွေသည်၊ 'Your Brain on Porn' ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ Youtube ဗွီဒီယိုလင့်ခ်များကိုကြည့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၌ Epiphany ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသော porn နဲ့ဆိုင်တဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် !! DS
ရုံပြောချင်တယ် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ မင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကငါ့ကိုလမ်းညွှန်မှုအသစ်ပေးထားတယ်။ ငါလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည် AG
သင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ဂယ်ရီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကယ်၍ YBOP ကိုမထိမိခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သောစိတ်ဆင်းရဲစရာလမ်းသို့ရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့၏ site ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်မတတ်နိုင်သလောက်များများလုပ်ဖို့ပေါ်တွင်သင်၏အချက်အလက် forward ပါလိမ့်မယ်။ VR
အားလုံးသည်သူ၏သုတေသနနှင့်အပျနှံအားလုံးကိုသူမ၏အချိန်နှင့်အကူအညီနှငျ့ဂယ်ရီများအတွက် Marnia မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါရိုးသားစွာငါ yourbrainonporn.com တွေ့ရှိခဲ့သောနေ့ရက်ကာလကိုငါ့အသက်ကို၏အရေးအပါဆုံးကာလ၏တဦးတည်းကြီးပြောနိုင်ပါတယ်။ CR
YBOP သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်မပါဘဲကျွန်ုပ်နှင့်အတူဘာဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်နေဆဲဖြစ်မည်ထင်သည်။ မင်းနဲ့ခင်ပွန်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်လကျော်ကျော်လောက်ညစ်ညမ်းနေခဲ့ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်တော့မည်မဟုတ်ဟုမထင်ပါ JK
ငါသည်သင်တို့ကိုပကတိပါရမီ, ဂယ်ရီဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများယူလူတွေကိုမလိုဘဲ ED ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှလူတို့သညျသန်းပေါင်းများစွာကူညီပေးနေနေကြသည်။
ဤသည်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကားအဘယ်သို့: သင်၏ reboot အစီအစဉ်ကိုငါ Cialis နှင့် Viagra ၏သေတ္တာများနှင့်အတူထက်ပိုတိုးတက်ရေးပါတီရာ၌ခန့်ထားပြီတစ်လထက်လျော့နည်းအတွက်အပြီးတွင်။
လူသားတို့၏သက်သာချောင်ချိရေးအတွက်သင်၏ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသိအမှတ်ပြုခံထိုက်ပါသည်။ ငါဒီအပိုင်းမှာပါဝင်ချင်တယ်၊ မင်းရဲ့သီအိုရီတွေကိုကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့အောင်ကူညီပေးချင်တယ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုငါကူညီမယ် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုလူတို့၏စိတ်နှင့်လိင်တံအပေါ်လူတိုင်းသတိပြုသင့်သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုတိုးတက်စေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် HG
ငါဒီအံ့သြဖွယ် website အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးပမ်းသကဲ့သို့၎င်းသည်အသက်ကယ်သမားဖြစ်ပြီးအလွန်အကျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့တ ၀ က်ရောက်နေပြီဖြစ်ရာ၎င်းသည်ကျွန်တော်ထင်သည်အတိုင်းမလွယ်ကူပါ။ CW
ဒါဟာငါတယောက်တည်းနှင့်ဤတူညီသောပြဿနာကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီထွက်ရှိအခြားလူများရှိပါတယ်မဖြစ်ကြောင်းကိုသိရဖို့ကောင်းသောခံစားရ၏။ ထွက်ရှိပါတယ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်အလုပ်လုပ်ဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်မသင်ယူခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါသတင်းအချက်အလက့် life.YS သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြပေမည်
ငါဒီ site သို့သင်အလုပ်နှင့်စွမ်းအင်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတယ် ဒေါ်
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါနှလုံးသားထဲကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူး၊ ၂၃ နှစ်အရွယ်မှာအပျိုစင်ဘဝကနေအခုလက်ရှိငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် 23 နှစ်ကြာ rewired နှင့်ပြင်းထန်သောကိစ္စတွင်ခဲ့သည်ယောက်ျားတွေအသစ်သောအရာနားမလည်သောအရာကအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်ခဏကြာလိမ့်မယ်။ ငါနှစ်နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းမရှိခဲ့ဘူးသော်လည်းမိတ်ဖက်နှင့်အော်ဂဇင်ပြသခဲ့ပြီးကုသရန် ၂ နှစ်ခန့်ကြာခဲ့သည်။ ငါအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုမကြာခင်တင်မယ်။ မင်း / ဇနီးနဲ့မင်းရဲ့ site အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါ့ဘဝမှာဘယ်မှာရှိမလည်းဆိုတာငါမသိဘူး။ PR
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့ဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးဆက် y တွင်ယောက်ျားနှင့်ကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုပြproblemနာရှိသည်၊ နောက်ဆက်တွဲပြသနာများနှင့်ယင်း၏အောင်မြင်မှုများကိုနားလည်ရန် (သို့) တွက်ချက်ရန်ပင်စတင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ငါးနှစ်အတွင်းမှာလူအများစုကညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုသက်သာအောင်ကူညီနိုင်တဲ့အဖွဲ့အမြောက်အများရှိလာလိမ့်မယ်။ ဒါကပိုပြီးလူကြိုက်များတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါတို့ဟာရှေ့ဆောင်လုပ်နေကြတာပါ။ လူနေမှုဘဝကိုပြန်လာဖို့ငါတို့ခြေချင်းတွေချနေတယ်။ ဂျာ
YBOP မှဤမျှလောက်။ ခင်ဗျားဟာအလင်းရောင်သမားတွေပါ။ ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးပိုပြီးနားလည်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဆင်းလာသောအခါငါ့ကိုခေါ်။ ငါ့ကိုလမ်း၌ပြန်သွားစေပြီးလျှင်၊ ၎င်းအတွက်စကားလုံးများမပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော်အကြိမ်သန်းပေါင်းများစွာကျေးဇူးတင်ပါ။ TM
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမတော်တဆတွေ့ မိ၍ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုမည်မျှစွဲလမ်းကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဘဝနှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုမည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်နားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမှကင်းဝေးရန်သင်၏ကိရိယာများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ စစ်ထုတ်တဲ့ကိရိယာကိုသုံးရုံနဲ့ကျွန်တော့်ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ ကျမမသွားခင်မှာ ၁၅ ရက်ကြာတဲ့အထိညစ်ညမ်းမှုမရှိခဲ့ဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်နောက်တဖန်ပြန်လည်စတင်နှင့်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝပြန်ရရှိရန်အခိုင်အမာပေါ့။ ဒီ site အတွက်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LD
လွန်ခဲ့သောရက် ၁၀၀ အတွင်းအပြုသဘောဆောင်သောတိုးတက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မုန်းတီးမှုများကြောင့်လူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကလည်းမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအကြားခြားနားချက်ကိုစတင်သဘောပေါက်လာသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင့်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေစဉ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင့်ကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားနေရပြီးနောက်ငါပင်စိတ်လှုပ်ရှားသောအခါငါပင်ခံစားရသည်။ ၎င်းသည်ဘေ့စ်ဘောရှိဒိုးနယနှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့်တူသည်။ သင်၏လင်းနို့ပေါ်တွင်အလေးချိန်အားလုံးနှင့်လေ့ကျင့်ပြီးရုတ်တရက်သင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အခါလင်းနို့သည်ဘာမျှအလေးချိန်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ စနေနေ့မှာငါမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှေ့မှာစကားပြောရတယ်။ ငါလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာငါမစိုးရိမ်ဘူး။
လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကဤအယူအဆသည်ကျွန်ုပ်ကိုရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ မည်သည့်မိန်းကလေးများနှင့်မဆိုစကားပြောသောအခါတွင်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းနောက်တဖန်ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားပေမယ့်ကိုယ့်ပြောနေတာစတင်ပြီးနောက်ဝေးသွားသည်။ အများကြီးပိုသဘာဝနှင့်စစ်မှန်ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒီအသိုင်းအဝိုင်းမရှိရင်ငါတကယ်ပဲအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှာပါ။ ငါ PMOing ဘယ်တော့မှမရပ်ဘူး၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပုံမှန် (သို့) ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အလွန်မြင့်တက်လာသည်။ ဒီဆိုဒ်မပါပဲငါဟာမိန်းမတွေနဲ့အတူနို့စို့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီး၊ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ငါ့ကို ၂၂ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲလက်ခံလိမ့်မယ်။ TG
အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်ပြproblemနာ (porn-related ED) နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသောအခါအစပြုခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုဤ site သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးမျက်လုံးနှင့်တွေ့သည့်ပုံထက်ပိုမိုသောအရာများရှိကောင်းရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ငါ site နှင့်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဆောင်းပါးများနှင့်ဖိုရမ်များကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကုသပေးပြီးကျွန်ုပ်နေသင့်သည့်နေရာသို့ပြန်ရောက်လာရန်ကူညီသည်ဟုခံစားမိသည်။ နယူးဇီလန်
ငါစိတ်ဓါတ်များ porn ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အခါတိုင်းကျွန်မ yourbrainonporn.com သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါ့ကိုဂယ်ရီနှင့်ပူးတွဲမှကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂အခါတိုင်းကယ်တင်တော်မူ၏။ နောက်တဖန်။ DM
ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလက YBOP ကိုတွေ့ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါရိုက်ခတ်နေသောနားလည်မှုလှိုင်းနှင့်တူသည်ဟုဆိုရပေမည်။ ငါဆင်ခြင်တုံတရားမရနိုင်တော့ဘူး၊ အက်စ်အက်စ်
သင်၏ Brain On Porn ကိုဖန်တီးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာဒီထက်ပိုမသိသာတဲ့ရပ်ကွက်မှာရှေ့ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ထို့အပြင်သင်နှင့် Marnia နှစ် ဦး စလုံးသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Cupid's Poisoned Arrow မှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုခံစားနေရသူများအတွက်အချက်အချာဖြစ်လာသည် - သင်၏ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဒီဘာသာရပ်အပေါ်အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ယူ။ site ကိုတစ် ဦး ကြီးမားတဲ့နှင့်ထူးခြားတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်၊ ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုငါမပြောနိုင်ဘူး။ သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုက္ခများကိုအချိန်မှီပယ်ဖျက်ပေးနိုင်သည်။ MD
ငါသည်ဤသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရပ်ရွာအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်တယ်; တကယ့်ဘဝတွေကိုပိုကောင်းစေသည်! ဖြစ်မှု
ဤပြissueနာနှင့် karezza အပေါ်သင်၏အလုပ်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းဟာမင်းဘဝများစွာကိုကူညီခဲ့ပြီးပြီ၊ ဒီစွဲလမ်းမှုတွေဟာမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစလေ့လာတုန်းကဘာသာရေးအရ၊ သင်နဲ့ဂယ်ရီတို့ကပေးတဲ့ဗဟုသုတအခြေပြုချဉ်းကပ်နည်းကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မီးရှူးမီးပန်းများကိုဖြတ်သန်းသွားကြတဲ့သူတွေရှိလို့ဝမ်းသာပါတယ် သင်နှင့်သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
YBOP.com ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုဟာပိုပြီးအကောင်းမြင်ဖွယ်ရာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ပြည်နယ်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။ ငါ porn ကနေ rewiring နှင့်အတူအများကြီးရုန်းကန် (နှင့်နေဆဲလုပ်ပေး) ပေမယ့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပေါ်မှာပါပဲ။ ဤသည်တနင်္ဂနွေငါသည်လည်းငါ့အသက်ကို၏ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ထုတ် session ကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ထိုတွင်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါကဤအရာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ် ၁၀၀% ယုံကြည်သည်။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်သောကရောက်နေသည့်ဘဝတစ်ခုမှလုံခြုံစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ ငါဘယ်တော့မှသင့်ကိုမတွေ့ရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် YG
ငါ့မှာသိပ္ပံပညာနဲ့ဆေးပညာသင်တယ်၊ ဒီရှုထောင့်ကနေထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငါအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ ဘာသာရေးနှင့်ရှက်ဖွယ်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလုံးသည်စုစုပေါင်း BS imo ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ ဦး နှောက်အတွင်း၌ရှိသောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြproblemနာကိုခံစားနေရသောလူငယ်များကိုပညာပေးရန်အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးနေသည်။ အခြေခံအားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀-၁၅ နှစ်လောက်ကဒီအကြောင်းကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ ငါအသက် ၂၇ နှစ်ရှိနေသေးတယ်၊ သိပ်နောက်ကျလွန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ LD
Marnia and Gary: မင်းလုပ်တာကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်မင်းကိုတွေ့ပြီ၊ သင်၏အလုပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလူအများပိုမိုနားလည်လာစေရန်ကျွန်ုပ်အလိုရှိပါသည်။ မင်းတို့ကိုမြောင်းထဲကနေထွက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုဆီကိုရောက်ဖို့မင်းကိုတိုက်ရိုက်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ လူအများမလုပ်နိုင်ကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အမတ်
အကြှနျုပျ၏စေ့စပ်မကြာသေးမီကဆိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, ငါသူထောက်ခံမှု, လမ်းညွှန်မှု, ဒီမှာရပ်ရွာမှတဆင့်လှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်။ LW
သင့်ရဲ့ TEDx ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!! ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတောင်မမြင်တွေ့ရသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၁၇ လသားကလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးအနာဂတ်အတွက်သူ့အတွက်အလွန်ကြောက်လန့်နေပြီးသူ့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရန်နည်းလမ်းများအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏သုတေသနသည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးမှုများကိုသေချာပေါက်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ FP
ညစ်ညမ်းတဲ့စက်ရုံအလုပ်သမားတွေက“ စိတ်ပျက်အားလျော့” တယ်လို့ပြောရင်ငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူးလား။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူများသည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းသတိပြုမိလျှင်၎င်းတို့သည်ပိုက်ဆံများစွာဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သင်၏ဆိုဒ်သည်ကျွန်ုပ်သိသလောက်တစ်ခုတည်းသောကြင်နာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောဆိုဒ်များသည်ဘာသာရေးစိတ်အားထက်သန်သူများဖြစ်သည်။ ငါကအဲဒီအချိန်က Taoist ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ယောက်ျားတွေကဘာသာရေးဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲသိပ္ပံပညာကိုဘယ်လိုထိုးသွင်းတာလဲ၊ ညစ်ညမ်းတာကိုမတိုက်ခိုက်တာ၊ မကောင်းတာလို့မခေါ်တာတို့၊ DM
ခင်ဗျားတို့ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနဲ့စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ 'ကျွမ်းကျင်သူ' တွေထက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီ။ ငါအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအတူတကွစုစည်းပြီးဒီခေါင်းစဉ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အချိန်နဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအခြေအနေကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုခံရလိမ့်မယ်လို့ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကရှေ့ဆောင်တွေပါ။ CH
(အသက် ၃၇ နှစ်) ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်မအောင်မြင်သည့်အခါ (သို့) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမဖွင့်နိုင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေသကဲ့သို့အရာရာတိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုစိတ်ချရန်အမြဲတမ်းအမြဲရှိနေခဲ့သည်။ များစွာသောပျက်ကွက်သောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးများနှင့်လွဲချော်နေသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုသံသရာတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သည် သင်၏ ဦး နှောက်ကို Porn ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် New Age Hippy Pseudo သိပ္ပံပညာနှင့် 'ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ' ဟုငါအစပိုင်းတွင်ထင်ခဲ့သည် အရင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်မဟာစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါလုပ်နေတာကြိုက်တယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်နေခဲ့တာလဲ ဆရာများ၊ ဆရာဝန်များနှင့်သတင်းမီဒီယာများသည်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ငြင်းပယ်မှုသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအချိန်တွင်ပင်“ ငါဟာစွဲလမ်းတတ်သူပါ။ သောက်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်အသက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီးအခန်း၏ထောင့်ရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့အရူးအမူးစွဲကပ်သွားသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပြန်သွားပြီးဒီလူတွေအားလုံးဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာကြုံခဲ့ရတာတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ ပူပြင်းသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူ ED, သူငယ်ချင်းများမှဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ရုံယေဘုယျအားဖြင့်အမှိုက်ခံစားရတယ်။ အခြားသူများက shit time ရှိကြောင်းသိခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ကြီးမားသောနှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါကဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအပေါငျးတို့သစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mumbo-ဂျမ်ဘိုမရှိဘဲငါ၏အခွအေနကေိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်အဖြစ်, ဒီ site ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။ EG
ငါသည်သင်တို့ကိုဗီဒီယိုများပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်အပေါ်သင်၏အသံကြား၏, ဂယ်ရီ, ဒါပေမယ့်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ဘူး။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၅၁ နှစ်ရှိပြီး P နှင့် M သက်တမ်းရှည်လျားသောသုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။ FJ
ဂယ်ရီ၊ မင်းရဲ့လက်ကိုလှုပ်ခါပြီးမင်းရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကငါ့အတွက်လုပ်ပေးတာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်မပြည့်မီ၊ မင်းဟာငါ့ရဲ့ဘ ၀ မှာကောင်းချီးတစ်ခုဆက်ဖြစ်နေတယ်။ မင်းရဲ့ site ကိုငါမတွေ့မချင်းဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးညွှန်းဆရာဝန်တွေမပါဘဲကုသမှုရဲ့သဘာဝစွမ်းအားကိုငါလုံးဝမသိဘူး။ ငါသင်ပေးခဲ့သောဆောင်းပါးများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုဖြည်းဖြည်းချင်း (နှင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်သည်) ကပြောင်းလဲသွားသည်။ JB
စကားမစပ်, ငါဆိုသည်ကားဤအခွင့်အလမ်းကိုယူရန်ရှိသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်နှစ်ခုလုံးကိုသင်နဲ့အတူတူပါပဲ Cupid ရဲ့အဆိပ်သင့် Arrow နှင့် YBOP ပစ္စည်း။ သင်နှင့်ဂယ်ရီတို့သည်တစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်စတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒီနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးမှာစကားလုံးပြန့်ပွားဖို့လူတွေကိုငါစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ပြီးတော့လူတွေနဲ့သူတို့၊ သူတို့နဲ့တခြားသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်ကူညီဖို့😀
(အသက် ၃၀၊ ၄ လ) သူကပိုကောင်းလာတယ်။ ငါက၎င်း၏ရယ်စရာယခုအမျိုးသမီးများန်းကျင်ဤမျှလောက်ယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ ၎င်းသည်မငြိမ်သက်မှု၊ ထင်ထင်ရှားရှားယုံကြည်မှုရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေသည်။ ရှေးရိုးရာ၊ သဘာဝအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုယခုဖွင့်စေသောအရာဖြစ်သည် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဆံပင်ကိုလှန်လိုက်ခြင်း၊ လှပသောပါးနပ်သောလှည့်ဖျားခြင်းဖြင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါ့ကိုပြုံးခြင်းကဲ့သို့) ညစ်ညမ်းတဲ့နေ့ရက်တွေကုန်လွန်သွားပြီးကျွန်တော့်စိတ်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ မင်းယောက်ျားတွေခေါင်းပေါ်မှာလက်သည်းကိုထိလိုက်တယ်၊ သင်က porn၊ ဆုချီးမြှင့်တဲ့စင်တာ၊ အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအကြောင်းသိပ္ပံ FACT ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရေးထားတာကိုငါသေချာစွာယုံကြည်တယ်။ PH
သင့်ရဲ့အလုပ်ငါ့အားအရာအားလုံးသည်။ အစဉ်အမြဲငါကြောင့်အဘို့အကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။ ငါနေဆဲဈ YBOP အပေါ်သို့လဲဘယ်တော့မှလျှင်ဖြစ်ပျက်ကြလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့, တခါတရံတွေးမိသည်။ DG
အကြှနျုပျ၏တိုင်ပင်စွဲအကြံပေးခြင်းအတွက်အထူးပြုနဲ့ကျွန်မ YBOP ပေါ်သို့သူ့ကိုလှည့်နဲ့သူလိင်စွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် non-ဘာသာရေးသယံဇာတအဖြစ်ကစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းပစ္စယယခုချွတ်ယူသည်။ လုလင်တို့သည်နောက်ကျောကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရရှိမှုနှင့်သင်နှင့်ဂယ်ရီအလုပ်တွေအများကြီးအတွက်ထားကြပြီ။ ငါပြန်လည်နာလန်ထူ / စွဲလမ်း / သိပ္ပံအသိုင်းအဝိုင်းအားဤ site ကိုအကြံပြုဖို့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ RH အ
YBOP ငါ့အသက်ကို၏အများဆုံးလိုအပ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ DE
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏ website ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဘုရားကျေးဇူးတင်ပြောချင်တယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် rebooting အကောင့်အချို့ကိုတဆင့်ဖတ်ရှုသည့်အခါအရာအားလုံးကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ငါကအခြားတစ်နေ့အသက် ၃၀ ပဲရှိသေးတယ်၊ ၁၅ နှစ်စွဲလမ်းပြီးနောက်ငါ PMO မရှိတဲ့နေ့ ၉ ရက်ဖြစ်သည်။ ငါအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိပြီးငါဒီကိုအနိုင်ယူဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ စစ်မှန်သောဘဝရှိအမျိုးသမီးများအားနိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းများကဲ့သို့သောရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှိသော်လည်းအပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုသတိပြုမိသည်။ TH
ကိုယ့်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှကြီးစွာသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာပုံမှန် porn အသုံးပြုသူပါပြီ, ငါအနည်းငယ်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မအပေါ်မယ့်အရာကိုနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ တခါတရံကျွန်မအိပ်ရာအတွက် masturbate ဖို့တိုက်တွန်းရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါ သွား. ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလှည့်တိုင်အောင်ကူကယ်ရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ JS
ဤဒေသရှိသင်လုပ်ဆောင်သမျှအတွက်ဂယ်ရီကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရှင်းနေသည်မှာဤပြaroundနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာများစွာရှိနေသေးသော်လည်းသင်သည်ဆွေးနွေးမှုအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးမရေမတွက်နိုင်သောယောက်ျားများအားအနည်းဆုံးသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြexploreနာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအားသင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒကိုမည်မျှပြောင်းလဲစေကာမူ (အတွေ့အကြုံမှ၊ ၎င်းသည်အရေးပါသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ) သင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိရန်အတွက်ယောက်ျားများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းစွာသုတေသနပြု၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အရမ်းကောင်းတယ် ကြီးစွာသောအလုပ်တက်ထားပါ! AG
အလွန်, အလွန် commonsensical ပစ္စည်းပစ္စယ - နှင့်ကောင်းစွာရှင်းပြသည်။ ငါမကြာသေးမီကဒီဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာသူမိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ရှိသည်။ သူ့ရည်းစားကိုအလွန်ဆွဲဆောင်သော်လည်းသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှနှစ်များစွာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းကြောင့်သုက်ပျောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူကတစ်လတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မလျှော့ဘဲထိုလမ်းကြောင်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အခုတော့သူကအမြဲပြီးသွားတယ်၊ ပြီးတော့လိင်ကအရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ်၊ ငါမှာလည်းအလားတူပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါနဲ့တူတူတူတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့အားလုံးကအတူတူပဲ။ သုတေသနနှင့်ကောင်းမွန်သောရှင်းလင်းချက်များကိုတွေ့ရခြင်းသည်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပြီးဘက်လိုက်မှုများကိုအတည်ပြုသည်သာမကအမှန်တကယ်ပင်၎င်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှမည်သို့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသသည်။ NS
ကမ္ဘာကြီးကိုလူသားတွေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပျက်ပြားစေတဲ့တခြားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုငါမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အပြုအမူများသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုမောင်းနှင်သည့်အရာနှင့်ဘဝကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် (ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) စတင်သောအခါ၊ ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးဆက်များကိုမြင်ရခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်သည် - ကျော်လွှားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသောများစွာသောအောင်မြင်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုမလျှော့ချဘဲ ညစ်ညမ်းဆေး
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားသားကောင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ပျက်မိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တက်ကြွစွာရှောင်ရှားပြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆန့်ကျင်မှုကိုအမှန်ပင်တိုးပွားစေခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်တရားမဝင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ လူတွေကဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ၀ င်ခွင့်ရသင့်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုငါမဆင်ခြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုသည်အနူးညံ့ဆုံးပုံစံဖြင့်ပင်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီညွတ်သောအသံဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအများပြည်သူသုံးအတွက်လူသိရှင်ကြားကြေငြာပြီးလိင်ဆန္ဒကဲ့သို့လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့်သဘာဝအလိုဆန္ဒကိုအဘယ်ကြောင့်ကျွေးမွေးသနည်း။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အတွေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊
လူတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မကစိတ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေး၊ BW
သင်လုပ်နေတာကအောင်မြင်မှုကြီးပါပဲ။ အဲဒါဟာအပြုအမူနဲ့ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးအတွက်ဆုချခြင်းနေရာဖြစ်တယ်။ GJ
YBOP ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ငါသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး မဟုတ်တော့ပါ။ ငါဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ကိုနောက်တဖန်မသုံးတော့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးလိပ်ဖြတ်တာကနေကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ဘဝဟာအများကြီးပိုကောင်းလို့ပါ။ ငါကဒီမှာလူတွေကိုအလုံအလောက်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ AG
ဒါကိုရှာဖွေခြင်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့သက်သာရာပဲ၊ နောက်ဆုံးတော့ငါမမေးတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေရဖို့။ ငါတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ် ငါထင်တာကတော့အမြဲတမ်းငါဖြစ်ခဲ့တာပဲ၊ အဲဒါတွေကိုလက်ခံပြီးငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနဲ့ကိုင်တွယ်ရမယ်။ အခုငါသိပြီ၊ ငါမှာပြaနာရှိနေပြီ၊ သတင်းကောင်းကတော့မင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ…အဲဒါကိုတည့်မတ်ပေးဖို့သိပ်မခက်ဘူး။ နေ့ ၂၈ နဲ့ငါတိုးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီ။ FD
ငါသည်ဤ site ကိုမှကျေးဇူးတင်စကားတဝိုက်ငါ့အသက်ကိုလှည့်။ IF
(ရက်ပေါင်း ၄၀၀) ဤကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်ပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်သဘောပေါက်သောအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကသဲလွန်စမရခဲ့ဘူး။ YBOP <YBR, SLAA, သူငယ်ချင်းများစာအုပ်များ၊ ကျွန်ုပ်၏ GF အားလုံးကိုအတူတကွလက်မခံအောင်လုပ်ခြင်းသည်လှည့်ကွက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားကငါ့ကိုတိုင်းတာလို့မရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ RG
ငါဖိုရမ်အသစ်ပါ အသက် ၁၂-၁၃ နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်၊ နံပါတ်အတိအကျကိုမသိဘူး။ အခုအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀ (ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်က ၂၁ နှစ်ဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်သည် www.yourbrainonporn.com နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဖိုရမ်တစ်ခုမှ link တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်တွင်ပဟေofိ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အတူတကွစတင်လာခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနက်မှာအိပ်ရာကနိုးလို့မရဘူး၊ ဘာလို့ငါ့ရဲ့လေ့လာမှုကိုမုန်းတာလဲ၊ တစ်ခါတလေလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့နေတာလဲ၊ အရာအားလုံးအပေါ်တကယ်ပဲအပျက်သဘောဆောင်တာဘာကြောင့်လဲ။ အဲ့ဒါကငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတာပဲ။
ဤသည်နေ့ရက်သည်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုသိရှိပြီး ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်အကြာဖြစ်သည်။ ငါပြန်ကောင်းလာနေပြီ။ ငါယုံကြည်သော်လည်းငါ့ ဦး နှောက်အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်မရသေးပေမယ့်ငါစိတ်ပိုင်းငါပို။ ပို။ ပြန်လည်ထူထောင်လျက်ရှိသည်ခံစားရတယ်။ ငါအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ထားရလာပြီ။ ပြန်လည်ကျင့်သုံးမှုတွေဟာအစမှာသူတို့လိုပဲငါ့ကိုစိတ်မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါသိတဲ့နေ့ကစပြီးငါ့အတွက်အရာရာအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါရူးသွားပြီ၊ နောက်ဆုံးငါပြန်ဖြစ်လာတော့မယ် ငါသည်ငါ့လေ့လာမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီ (သို့သော်ကောင်းသောနည်းဖြင့်) ငါဟာငါ့ကိုယ်ပိုင်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုပြီးမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ငါသဘောပေါက်လာတာကငါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုတကယ်မသွားဘူးဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စွဲနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မြေအောက်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုသို့ရောက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နေလဲကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သော်လည်းဘာမှပြောင်းလဲရန်မလှုပ်ရှားခဲ့ပါ။
ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေမေးချင်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုငါနှင့်အတူစိတ်ထဲမှလာသောကြောင့်, ငါ့အတွက်တော့ငါစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ Porn ကစွဲလမ်းတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ငါမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဘယ်တော့မှမ နောက်ဆုံးမှာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ streaming ရုပ်ရှင်တွေကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အချို့သောစွဲလမ်းမှုတစ်ခုလို့တစ်ခါမှတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်သည်ဤအပြုအမူကိုသတိမပြုမိဘဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းကသင့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့သင့်ကိုထိန်းချုပ်သောသင်၏ခြေလက် ဦး နှောက်သည်အပြည့်အဝအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ငါနဲ့အတူမတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာဒီလင့်ကိုမတွေ့ရဘူးဆိုရင်ငါဟာဖုတ်ကောင် (သတိမထားမိတဲ့) ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေ ဦး မှာပဲ။ ဒါကငါ့ကိုကြောက်တယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းကနောက်မှ .. ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှာရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေဟာနှေးကွေးတဲ့လူသတ်သမားပါ။ ကျွန်တော်ကအရင်ကမနေထိုင်ခဲ့ဘူး၊ ထိုအရာသည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြောက်လန့်စေသနည်း၊ ငရဲသည်ဤအချက်ကိုမသိသောကြောင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအားလုံးနှင့်အတူအများပြည်သူကဤဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုမသိပါ။ သူတို့ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ထိုအရာသည်သတိလစ်မေ့မျောစွာဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူသားတစ် ဦး အနေနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမသိရှိဘဲ၊ ဖြစ်ခြင်း။
ဘယ်သူမှသေးဖော်ပြကြောင်းဖြစ်ပါတယ် www.yourbrainonporn.com “ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်ခြင်း” အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ dopamine receptors များအားပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်သင်၏လိင်စိတ်ကိုကျန်းမာစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျန်းမာတဲ့လိင်မှုကိစ္စအမျိုးသားတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့“ မင်းဘာလုပ်ရမှန်းအရေးမကြီးဘူး” ဆိုတဲ့ဒဏ္ingာရီကိုစိန်ခေါ်လိုက်တယ်။ ကျန်းမာသောလိင်ဆက်ဆံမှုစနစ်ရှိသူတစ် ဦး အားရပ်တန့်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ရှိပြီးသဘာဝကြိုးမဲ့စနစ်ရှိသူနှင့် dopamine ကို“ ပုံမှန်ခံစားရရန်” ငတ်မွတ်သူတစ် ဦး နှင့်များစွာခြားနားသည်။ ဒါကစွဲလို့ခေါ်တယ်
အမူအကျင့်စှဲ dopamine ၏ချွတ်ရုံကိုအခြားစွဲတူသော fuck ဆိုတဲ့-up, အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ငါသည်လည်း dopamine receptors ၏ရှားပါးမှုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်ဦးဆိုးဆိုးရွားရွားကြိုးကဦးနှောက်ဤလျှောက်ထားမယ့်အစအဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ထိန်းချုပ်ထား-ကျော်သို့မဟုတ်အောက်မှာ-controlled ဖြစ်စေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်မဆိုကြင်နာ၏လူမှုရေးအေးစက်မှားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားကြပါတယ်။
RSD တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း“ သဘာဝပုံစံများ” သည်သွားရန်လမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုရှာဖွေရတာကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါဒီ shit မဆိုအပေါ်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းယုံကြည်စိတ်ချမရှိတော့။ ဒါကအစားအစာ၊ လိင်၊ အလုပ်၊ ဦး နှောက်ဆုချူပ်ဓာတုဗေဒအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုများကမ္ဘာကြီးကိုစိန်ခေါ်မှုမဖြစ်စေရန်အတွက်၎င်းသည်လိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်အကျွံနှိုးဆွခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းသည်“ အန္တရာယ်ကင်းကင်း” မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤ site သည်ကျွန်ုပ်သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ဖူးသော (သို့) လည်ပတ်မည့်အရေးအကြီးဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဝေမျှမှုအားလုံးနှင့်သင်တို့၏ထောက်ခံမှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ PS
ဦးယောက်ျားတွေအများကြီးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်, ငါအမြဲသင်တို့ဆီသို့ကြွေးမြီများနှင့် Marnia အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းတို့အတွက်ယောက်ျားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဦးအမှန်တကယ်လူနေမှုအခြားသောလမ်းရှိကွောငျးအကြှနျုပျကိုပြသခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှင့်သိရှိလူတို့နှင့်အတူကောင်းသောကံ !!! EO
ဒါကသိပ္ပံပညာသစ်ပါ။ ငါပြောနိုင်တာကဒီကောင်လေးကအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းပြီး“ reboot” ၏အကြောင်းရင်းနှင့်သဘောသဘာဝကိုလူမျိူးများအသုံးအနှုန်းတွေကိုပထမဆုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူဖြစ်တယ်။ သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာသူလုပ်ခဲ့သည့် (အမှန်တကယ်ကောင်းသည်) လုပ်သည့်အိမ်လုပ်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ပြီး rebooters ၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာကလူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါက receptor sites တွေအကြောင်းပါ။ ဒါဟာ laydown လက်တစ်မျိုးပါပဲ။ ကောင်လေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသံနဲ့ရိုက်တယ်။
သင့် ဦး နှောက်ကိုဝက်ခြံ၊ ခြောက်ဆယ့်ခြောက်စီးတွဲတွင်ရှာဖွေပါ။ .YouTube ။
ထို့နောက်သင်သည်ဤအရာကိုအခြားအရာများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ အထူးသဖြင့်သုံးပါးပေါင်းစု၏ ဦး နှောက်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ၊ သကြား၊ သင်မြင်သည့်အတိုင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်” ဆိုတာလုံးဝနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိသည့်အပြင်ခေါင်းစဉ်မဟုတ်သည့်အခြားမှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလူတို့အားနှစ်ပေါင်းများစွာအရှက်ကွဲစေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တနည်းကား, ဆီလျှော်။ ငါကတကယ်ကဘာလဲဆိုတာနှင့်ပတ်သက်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစောင့်ရှောက်ရန်ဤအကြောင်းအရာကိုမှဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးကပတ်ပတ်လည်ကိုမနမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ site ကိုလူများနှင့်အတူပြည့်လျှံနေသည်, စစ်မှန်သောတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်း။ ဟုပြောသည်လုံလောက်သောငြင်းပယ်လျှင်, ကပယ်ချရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငြင်းပယ်မှုနှင့်အတူ၊ ငြင်းပယ်မှုသည်နိဂုံးချုပ်ဖြင့်စတင်သည်၊ နောက်ပြန်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသူသည်မည်သည့်ဘက်လိုက်မှုရပ်ထားကာအလုပ်လုပ်သည်။ အားလုံး site ကို၌တည်၏။ လူတန်းစားအမျိုးမျိုး၊ အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးမှယောက်ျားများ။
ထွက်မလာသေးသောအရာသည်အတင်းအကျပ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမည်သည့်အရာမှမပြုလုပ်ပါ။ တကယ်တော့မဆို compulsivity ။ အကယ်၍ သင်သည် D2 dopamine receptor sites အကြောင်းပြောနေလျှင်၎င်းသည်တူညီသောအရာဖြစ်သည်။ အရက်သောက်သူများသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုလျှော့ချရန် D2 receptors တွင်အလုပ်လုပ်သောပုံမှန်မဟုတ်သော anti-psychotics များကိုယူနိုင်သည်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Quetiapine ) ။ ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်အဖြစ်ဝေးဒီခေါင်းစဉ်သက်ဆိုင်ရာအတိုင်း, ကမ္ဘာကြီးကိုနေဆဲပြားဖြစ်ပါတယ်။
Gary Wilson ၏အမြဲတမ်းအလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး ... သိပ္ပံစက္ကူရည်ညွှန်းမှုပမာဏသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဤသည်မှာလေးနက်သောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သုတေသနဖြစ်သည်။ သငျသညျ Gary & အဖွဲ့သည်🙂 BB ရှိသည်ဖို့က၎င်း၏ကြီးမြတ်
သင်တို့နှစ်ယောက် Marnia & Gary, ငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီးပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်သက်ကြီးရွယ်အိုများပြန်လည်အမှတ်ရခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကဖြစ်သည် ယနေ့တွင် ငါ YBOP အပေါ်သို့လဲ, ငါ့အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုရရှိမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုဖန်ဆင်းသော။ ဤသူသည်ငါလေးခုကျော်ကဆယ်စုနှစ်များစွာအဘို့စစ် တိုက်. ခဲ့ကြောင်းနှင့် YBOP 1969 ကတည်းကငါ့ကို entrapped ဖူးသောသံသရာကိုချိုးဖောက်ဖို့ပျောက်ဆုံးနေဒြပ်စင်, သော့ကိုသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးမယ့်စစ်တိုက်သည်။
ဒါဟာငါဤသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာဖို့နဲ့တစ်ဦးတည်မြဲပြီးအလွန်ကိုမှန်ကန်သဘာဝတရား၏ Self-တိုးတက်မှုဆီသို့ဦးတည်လူများ၏မရေမတွက်နံပါတ်များကိုကူညီပေးခဲ့တယ်သောအခြေခံ lay ဖို့အချိန်ယူဘို့သင်တို့တွင်နှစ်ခုဆီသို့ဦးတည်ခံစားရကျေးဇူးတင်ကြောင်း overstate ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်အကြှနျုပျ၏စိတျကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းယခင်ကထက်လည်ပတ်နေသည်။ ငါသည်ငါ့အလုပ်နှင့် ပတ်သက်. အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းနှင့်မတိုင်မီတည်ရှိဘယ်တော့မှပြီယုံကြည်မှုတစ်ခုသဘောမျိုးရှိနေပါတယ်။ ငါရေးလိုက်အမျှကျွန်မရဲ့ကွန်ပျူတာ၏ဒုတိယမော်နီတာ၌ငါ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေ့နိုင်ပါသည်နဲ့ကျွန်မပြန်ရှာနေတဲ့လူကိုမဟုတ်ဘဲမိမိကိုမိမိထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုရှုတ်ထွေးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြည့်ပါ။ My self-လေးစားမှုထိန်းချုပ်မှုရရှိမှုကတည်းကစိုက်ပျိုးထားပြီးကဆင်ကန်းတောတိုးမပေးသော, ရရှိခဲ့ပြီးခဲ့လေးစားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ရုံသငျသညျအကြှနျုပျအဘို့နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောဆငျးရဲဒုက်ခအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘို့ဤဖြစ်နိုင်သောအောင်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရပြီ, အဘယ်သူကိုအများတို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်လိုပဲလုံးဝမျှော်လင့်ချက်တက်ပေးထားခဲ့ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ကျန်အဘို့ဤပြဿနာများ၏မသနားတျောမူမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုလက်ခံခဲ့ကွောငျးသိရ သူတို့ဘဝ။
အသုံးပြုသူများသည်ပြန်လည်ထူထောင်မှ ပို. တုံ့ပြန်ချက်အဘို့, ထုတ်စစ်ဆေး ဦးလေး Bob က နှင့် ပြန်ဖွင့် Accounts ကို.
“ သင်၏နံဖေး” \_ t